၂၀၀၇ (ဇေယျာလင်း) | လမ်းအိုလေး
July 21, 2013 by lanolay	Leaveacomment
၂၀၀၇ မှာရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာတွေ တစ်နှစ်တာအတွက် စုစည်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကဗျာလမ်းကြောင်းကိုလည်း ပြန်စစ်လို့ရအောင်ပါ။ ကဗျာအပေါ်အဓိက ထားရှိတဲ့ ခင်မင်မှုကိုလည်း ကြောင်းလမ်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
တချို့ကဗျာတွေက ကြောင်ကြောင်ကျားကျား၊ တချို့ကဗျာတွေက ကြောင်လက်သည်းဝှက်။ ဒီစာအုပ်လေးကတော့ ကြောင်လိမ်လှေကား တစ်မျိုးပေါ့။
ခြုံလိုပေါက်တဲ့နှင်းဆီအမျိုးအစားရဲ့ တန်ဘိုးကို မသုံးသပ်ခင်
နှင်းဆီဟာ အချစ်ပဲလို့ ဘယ်သူပြောခဲ့သလဲ
အရေပြားပေါ် အမည်းစက်ပေါ်တာတို့ သံချေးစားတာတို့ကို
ဒါမှမဟုတ် နှင်းဆီဟာ အချစ်တစ်ခုတည်းကို ရည်ညွှန်းသလား
နာမကျန်းခြင်းကို ကျန်းမာခြင်းအဖြစ် တမင်ရွေးချယ်တာ
ရေမွှေးနှင်းဆီ၊ ဗမာနှင်းဆီ၊ ကျောက်နှင်းဆီ
ဘာအရောင်၊ ဘာရနံ့၊ ဘာအသွေးလဲ – န/ နှင်းဇီ /
နှင်းဆီရောင်ဆိုတာ အနီရောင်နု၊ ပန်းရောင်
“နာမကျန်းသည် အိုနှင်းဆီ” (၀ီလျံဘလေ့က်)
“နှင်းဆီဟာ နှင်းဆီဟာ နှင်းဆီဟာ နှင်းဆီ”(ဂါးထရုဒ်စတိုင်းန်)
“ချစ်ပြုံးနှင်းဆီ” (ဂီတနက်သန် ကိုစောညိန်း)
“နှင်းဆီဖြူရဲ့ အဝေးကလူတစ်ယောက်” (ခင်ဝမ်း)
“My Love is likeared rose”
“ငါ့ရဲ့အချစ်ဟာ နှင်းဆီနီရဲ တစ်ပွင့်လို”လား
“ငါ့ချစ်သူဟာ နှင်းဆီနီရဲ တစ်ပွင့်လို”လား
“အချစ်ဟာ ငရဲကလတဲ့ခွေးတစ်ကောင်” (ခရစ္စတြောဖလီနို)
အဲဒါ ရိုးတံစင်းစင်းလေးပေါ်က နှင်းဆီဖူးငုံလေးလား
အမြင်သွေလွဲမှုလား / ယစ်မူးခြင်းအာရုံတစ်မျိုးလား
နှင်းဆီတစ်ပွင့်ဟာ ပင်လယ်အနံ့နဲ့ တုန်ခါနေတဲ့
သင့်အာရုံတွေမှတ်မိလား အဲဒီတုန်းက. . .
တစ်သက်မှာ အရည်ရွှမ်းတဲ့ပန်းနုတွေ တစ်ခါပွင့်ပြီးရင်
နောက်တစ်မျိုးကတော့ စက်တင်ဘာကနေ အောက်တိုဘာအထိ
နှင်းဆီတကာ့ နှင်းဆီတွေရဲ့ တော်ဝင်နှင်းဆီ
Alba X semiplena နှင်းဆီရေမွှေးထုတ်လုပ်ရာ
“ကျွန်မဘ၀မှာ နှုတ်မရတဲ့ နွေညနှင်းဆီဆူးနဲ့ မျက်နေတာ”
ဈာပနနှင်းဆီ၊ ပွဲနေပွဲထိုင်နှင်းဆီ၊ အခမ်းအနားနှင်းဆီ
ရော့၊ ဒီမှာ၊ ခင်ဗျားအတွက် “နှင်းဆီ” တစ်ပွင့်
ရော့၊ ဒီမှာ၊ မင်းလေးအတွက် “နှင်းဆီ” တစ်ပွင့်
ရော့၊ ဒီမှာ၊ ငါတစ်ယောက်ယောက်အတွက် “နှင်းဆီ” တစ်ပွင့်
ကဗျာအတွက် “နှင်းဆီ” တစ်ပွင့်
အဲဒါ ခင်ဗျားပြောသလား။ ။
၁၂၊ ဇန်န၀ါရီလ ၂၀၀၇
ကဗျာဆိုတာ ငါတို့ပဲ ငါတို့ရေးမှကဗျာ
ငါတို့ သတ်မှတ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီမှ ကဗျာ
ငါတို့ရေးသလို လိုက်ရေး အဲဒါမှကဗျာ
“ကဗျာဓာတ်” နဲ့ “အလှတရား” အဲဒါ ငါတို့ပဲသိကြတယ်
“ကဗျာဓာတ်”နဲ့ “အလှတရား” ငါတို့ဆီက စီးဆင်းတယ်
ပြည်သူ့ဘ၀ရနံ့ သင်းပျံ့ အဲဒါမျိုးမှ ငါတို့ကဗျာ
ရင်တွင်းမှာ အလိုလိုစီးဆင်း ကဗျာဓာတ်တွေ တဖျင်းဖျင်း
ကဗျာရဲ့ မူလ မူလရဲ့မူရင်း ငါတို့ထံမှသာစီးဆင်း
သမိုင်းရှိတဲ့ ငါတို့ကဗျာ အနာဂတ်ရှိတဲ့ ငါတို့ကဗျာ
တိုးတက်တဲ့ ငါတို့ကဗျာ အရှိန်အဟုန်ပြင်းတဲ့ ငါတို့ကဗျာ
ငါတို့ဟာ ငါတို့ကဗျာ ငါတို့ဟာငါတို့ ကဗျာ
ငါတို့ဟာ ကဗျာ ကဗျာရဲ့ ရှေ့တန်း ကဗျာရဲ့ ခံစစ်
ငါတို့မှာ သမိုင်းရှိတယ် ငါတို့မှာ အနာဂတ်ရှိတယ်
ငါတို့မှာ ယုံကြည်ချက်ရှိတယ် ငါတို့မှာ ပြည်သူရှိတယ်
ငါတို့ဟာ တိုးတက်တယ် ငါတို့ဟာ ကဗျာ့ဆရာတွေဖြစ်ကြတယ်
“ငါခံစားတာမှ အစစ်အမှန် အဖိုးတန်”
“ငါမှ ငါသာ ကဗျာ့ဆရာ”
“ငါ”သုံးငါ “ဗဟုဝါဒ” ဒါဟာအနုမာန မဟုတ်ဘူး
ခံစားမှုစစ်စစ်သာ ကဗျာရဲ့အသွေးအသား (ငါတို့)
ဘာသာစကားဆို ပျင်းတောင်ပျင်းသေးတယ်။ ။
၁၆၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၀၇
မှတ်ချက်။ ။ ထရော်မာ = ဒဏ်ရာတစ်ခုခုကြောင့်
ကိုယ်၊ စိတ်တွင်ပေါ်လာသော ဒဏ်။
ရှိရင်းစွဲ ဘူမိသွင်ပြင်များအပေါ်အကြီးစားဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု
လေ့လာတွေ့ရှိချက် (ကိစ္စပြီးသွားမှ) (၁)။ ။
လျှောကျသွားခြင်းဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်မရှိသော (အဟမ်း……..အဟမ်း)
နာရီကြည့်ဖို့ဘယ်လက်, မ, လိုက်တာ ညာခြေကညွှတ်ကျသွားတယ်လို့ကွယ်
လူမှုဆိုင်ရာ၊ ရသဆိုင်ရာ၊ ၀ါစင်္ဂဆိုင်ရာ (ရှစ်ပါး? ကိုးပါး?)
“ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ၊ ရှေ့က လေးစားရပါသော အသိပညာနယ်ပယ်ကြီးတစ်ခြမ်း
လမ်းဘေးဆင်းရပ်ပေးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာ၊ ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ၊ ရှေ့က အသိပညာ
ငလျင်မလှုပ်ခင်အချိန်၊ နေရာ၊ ပြင်းအားကြိုတင်သိရှိရန်
စိတ်ချယုံကြည်အားကိုးထိုက်သော နည်းစနစ်များ (ရှိ/ မရှိ)
မြိုသိပ်ထားတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခရတ်စတေးရှင်းအခွံမာ
(ခရတ်စတေးရှင်း = အခွံမာရှိသော ကဏန်း၊ ပုဇွန် စသည်ပါဝင်သော
မာကျောသော မျက်နှာပြင်၊ အထူးသဖြင့် ကမ္ဘာမြေကြီး၏ အပေါ်ယံအလွှာ
ရုန်းခြင်းကို အာရုံပါးသော အပေါ်ယံလွှာကျောက်သားများ၏
သဏ္ဍာန်မည်းကြီးတစ်ခု အော်လံသံနက်ကြီးတွေတခဲနက် သွန်းလောင်းချ
ကျောပေးထားတဲ့ ကောင်းကင်နောက်ခံမှာ အစာခြေနှုန်း (၀ါ)
အစာချက်နှုန်း (၀ါ) အစာမှစွမ်းအင်ပြောင်းနှုန်း မတူကြတဲ့ တိမ်မည်းတွေ
ပရိသတ်ဟာလည်း. . .. ဟင်…..ပရိသတ်ဟာလည်း…ဟင်…….
“ဟုတ်ကဲ့၊ အဲဒါပြီးရင် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အဘိဓာန်တွေ၊ ဒဏ္ဍာရီတွေ
အံ့မခန်းလူစွမ်းကောင်းရာဇ၀င်တွေ၊ ဇီဝနည်းပညာတွေ၊ စနစ်တကျ
ဇာတ်ရုံထဲမှ မီးများကို မှိန်လိုက်သည်
အလျား၊ အနံ၊ ထု သုံးဘက်မြင်ရုပ်လုံးကြွလာတော့မည့် သဏ္ဍာန်
ကုဗမီတာသန်း ၂၅၀ ရှိ ရေနံရံကြီးရွေ့လာပုံ
ငါက မင်းမမွေးခင်ကတည်းက မူလအရောင်စစ်စစ်ကွ
သြော်….အားလုံးဟာ သင်္ကာမကင်း မသင်္ကာဘွယ်ရာတွေချည်းလား
အင်းဆက်ပိုးတွေဟာလည်း စက်တပ်သူလျှိုတွေလို့ ခြင်အရိုက်မှာ
လေ့လာတွေ့ရှိချက် (ဟုတ်ကဲ့)၂။ ။ ခုနှစ်နှစ်ကြာတည်ဆောက်ခဲ့သော
ရေကာတာ၊ ခုနှစ်မိနစ်အတွင်းပြိုကျသွား ကီလိုမီတာ ၂၀ အကွာအဝေးအထိ
ရေလှိုင်းလုံးကြီးဟာ မီတာ ၅၀ အမြင့်ရှိ (အထောက်အထားများ)
“ဟုတ်ကဲ့၊ လမ်းရှင်းပေးပါ ခင်ဗျာ၊ ဟိုတောအုပ်ကြီးတစ်ခုလုံး
စက်မှုတော်လှန်ရေးရဲ့ အန္တာတိကရေခဲတိုက်ကြီးတွေ၊ ယုံကြည်မှု
ထဲက အာဖရိက ကွက်လပ်မည်းကြီးတွေ ဘေးဖယ်ပေးပါ
ကံကြမ္မာ ဟင်းချို(ပေါ့ရွှတ်)ကိုယောက်ချိုပဲ့ဖြင့် တိုက်ကျွေးခြင်းများ
မိမိတို့ ဘယ်လိုခံစားပုံ၊ မိမိတို့ဘယ်လိုနားလည်သဘောပေါက်ပုံ၊
သင်က သင့်ကို သင်သစ္စာရှိကြောင်းသင်ကိုယ်တိုင်
သင့်အားသင် သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ သက်သေပြလိုက်ခဲ့ပြီပေါ့
မိုးထဲအရည်ပျော်ကျနေတဲ့ မိမိရွှံ့ရုပ်နဲ့ မိမိ
၁၉၅၆၊ မတ်လ ၃၁
၄၇၅မီလီမီတာအထိ ညွှတ်ကွေးသွားသော ဘာသာစကားတံတား
တံတား၏ အတွင်းယက်မများမှ ကျိုးပဲ့သွားသော မူလီခေါင်းများ
ယာယီ တည်နေရာရပ်ညွှန်းမှာ ရင်ဘတ်ပေါ် ၀န်အလေးပိခြင်းများ
“ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ၊ လမ်းရှင်းပေးပါခင်ဗျာ၊ ညွှတ်ကိုင်း
ကျလာတဲ့ တံတားများဘေးဆင်းရပ်ပါခင်ဗျာ၊ အနာဂတ္တ
ကျမ်းကိုင်အတိတ်စွဲရပ်ကွက်များ၊ လမ်းများ၊ ရောဂါများ၊
မုခ်ဦးဝင်ကွန်ကရိမျက်နှာစာ တအိအိအက်လာခြင်းများ၊ ရာသီဥတုများ
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ၊ ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ၊
၇၊ မတ်လ ၂၀၀၇
ဟုတ်တယ်၊ အပိုင်းအစတွေပဲ သိမှု၊ အနုပညာ၊ လူ့ဘ၀
သစ္စာမရှိတဲ့ ငါ့လက်မောင်းမှာ မင်းအိပ်စက်ပါ အချစ်ရယ်
၀ ဟ အော်ဒင်
မင်းမှာလည်း အပြစ်ရှိတယ်၊ ငါ့မှာလည်း အပြစ်ရှိတယ်
မျက်နှာဖုံးမခွာရဲတဲ့ အူခွေတွေနဲ့ တုပ်နှောင်လို့
ရှင် ကျွန်မခံစားချက်တွေကို အသိအမှတ်မပြုတော့ဘူးလား
ကျွန်မဟာ ဟာ ဟာ နေတယ်
ဟာနေတဲ့ ကျွန်မဟာ ဘာဟာနေလဲမသိရ
(အဲလေ။ ဟုတ်ပေါင်) ကားဖြူကြီးစီးလို့
ရှင်ဟာ ယောက်ျားတို့အလုပ် မစွမ်းနိုင်ဘူးလား
ဤကိစ္စကို သင်ဆက်ဖတ်ရန် စိတ်ဝင်စားပါသလား
ငါဟာ ငါ့အရေပြားဂြိုဟ်လေးထဲမှာ ပြစ်ဒဏ်ကျခံရမှာလား
ကိုယ့်ဘ၀မှာ ကိုယ့်ကြမ္မာနဲ့ နေထိုင်ခွင့်အတွက်
တောင်( တောင့်) မခံနိုင်ဘူး
ဒုတိယခလေး သူမ မ,ရချင်ပဲရသွားတော့
ငါတို့အ, ခဲ့ကြ ငါတို့န, ခဲ့ကြ
“နံရံ”ကို “နုံရံ”လို့ ရေးမိသတဲ့
“ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်၊ ကျွန်မနာမည်က နန်းခင်တွယ်ပါ
ဟာ ခင်ဗျားက ဘလိုင်းကြီးပဲ
၁၄၊ မတ်လ ၂၀၀၇
ပြင်ပလောကနဲ့ တစ်ခုတည်းသော အဆက်အသွယ်
အချို့နေရာတွေမှာ အစိုးရ ရဟတ်ယာဉ်တွေ ည၀တ်ရုံနဲ့လာကြတယ်
ဒေသခံရွာသားတွေပေါ် ငရုပ်ကောင်းတွေ ငှက်ပျောသီးတွေ
စစ်ကြီးဟာနေ့လည် ၁၄း၅၀ နာရီမှာ မြေကြီးထဲထိုးရပ်
အကြောက်တရားကင်းမဲ့စွာ ဆယ်စုနှစ်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ်
လမ်းကျိုးတွေ လမ်းကွေးတွေ အပြည့်သယ်ဆောင်လာတဲ့
အသက် ၄၀ ကျော် အထိ
ကမ္ဘာကြီးဟာ ငါ့နာမည်လိုပဲ တောနက်ကြီးတစ်ခုထဲမှာ
လူရိုင်းစိမ်းတွေရဲ့ ဆူဆူညံညံရယ်သံတွေဟာ ငါ့မျက်ခွံအထိ”
မျော်လင့်ချက်လို ပြုတ်ပြုတ်ကျနေတဲ့ မေးရိုးနဲ့ငနဲပေါ့
ဦးထုပ်က တွဲလောင်းကျကြိုးနဲ့ မေးအောက်ကနေထုံးလို့
ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ စကားက ခြင်းထဲသူ့ကိုယ်သူထဲ
တောင်တက်သမားတွေအားလုံး တက်ဖူးကြတဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့
၂၂၊ မတ်လ ၂၀၀၇
ဤသို့ဖြင့် “သူ့အကြောင်းတွေးသလိုလိုနဲ့ ငါ့အကြောင်း
လိုက်ဖမ်းရ၊ ခြေဖျားအောက်နင်းရ၊ ဖင်ခုထိုင်ရ၊ ငါ့
အပိုင်းအစတွေ အချိုးအစားပျက်ပျက်နဲ့ပဲ ကော်ကပ်ရ
စတေပလာချုပ်ရ၊ အမည်တပ်ရ၊ တစ်ညလုံးပဲညလုံးပေါက်ရ
ငါ့ကိုယ်ငါ ရသအလုံးစုံ စို့နင့်အောင်ခံစားရ”
ပိုက်ကွန်တစ်ခုကို သေသေသပ်သပ်ခေါက်ချိုး ချိုးပြီး
အိပ်ကပ်ထဲထည့် မြို့ထဲထွက်ခဲ့ ဘာဖမ်းမလဲ
မသိ၊ ဘာမိမလဲ၊ ပိုက်ကွန်ကိုတော့ ပစ်ရမှာပဲ မစ္စတာချာလီ
ပျော်ပါရဲ့လား၊ ပျော်ရဲ့လား၊ မိမိကိုမိမိမမေးကြေး
ထွေးပြီးမှပဲ “ဒုက္ခ၊ ဒုက္ခ၊ ငါ့နာမည်များပါသွားသလား”
ဒါကို ငါပြောနေတာဖြစ်တယ် ဟိုကောင် ဇေယျာလင်းမဟုတ်ဘူး
လဲရာအကြွေးတောင်းခံရ၊ မြေနိမ့်မှာ ခရမ်းပျိုးခံရ၊
ပတ်ပတ်လည် ရောင်းကုန်ဆိုင်ဘုတ်ဟီးဟီးတွေပေါ်က ပမာ
မခန့်ရုပ်ပုံတွေ (ဒင်းရုပ်ပုံတွေ) စာသားတွေ (ဒင်းစာသားတွေ)
ဒင်းဟာ “အစစ်အမှန်”လဲ ငါဘာ “အစစ်အမှန်”လဲ
လမ်းဘေးက လက်တစ်ဝါးစာ အပ်ချုပ်စက်နဲ့ငါ့ရဲ့
ဘယ်အရာရဲ့ ဘယ်နေရာပြန်ချုပ်ရ၊ ချုပ်ရိုးဖြည်ရ
သားသားဟာ ဘ၀ကိုစစ်စစ်ကြီး ငြီးငွေ့နေပါပြီ
နွေဦးလ,ဟာ(သွားစမ်းပါ၊ အလကား၊ ဘာမှမဟုတ်ဘူး)
ဟေ့ကောင်၊ ငါ့ကိုလာခေါင်းမစားနဲ့ မုန်တိုင်းထဲရောက်သွားမယ်
ဂျိဂျိ ဂျစ်ဂျစ်ဂျစ် ဂျိ ဂျစ်ဂျစ် ဂျိဂျိ ဂျစ်ဂျစ်
“လိုချင်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဟာ ဘယ်ပေါ်မှာမူတည်”
လိုက်သည့်နှယ်” ထုတ်ဝေသူ ဟာပါ – ကောလင်းန်စ်
၂၅၊ မတ်လ ၂၀၀၇
ဒါတွေဟာ တကယ်ဖြစ်နိုင်လား တကယ်ဟာ ဒါတွေဖြစ်နိုင်လား
ဆေးခန်းက စာရေးမဆီက စာရွက်ရလာပြီ ‘ပေါ့စတစ်’တဲ့
ကျီးကန်းတွေဟာ ဆက်အာနေမယ်သွေးထဲမှာ ‘ပေါ့စတစ်’
သွေးနီဥတွေဟာ မြက်ခင်းမည်းကြီးထဲမှာ ဆက်ပွင့်နေမယ် ‘ပေါ့စတစ်’
ပေါ့စတစ်နဲ့ကွဲပြားတဲ့ နဂ္ဂတစ်ရဲ့ ခြားနားမှုဟာ ရှောင်တိမ်းချင်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်
‘ပေါ့စတစ်’ ဆိုအကောင်း ‘နဂ္ဂတစ်’ဆိုတာ အဆိုးမဟုတ်ဘူးလား
နေ့မှာ နေတစ်လုံးပဲထွက်တယ် ‘ပေါ့စတစ်’ ဒါပေမယ့် အများကြီးပိုလျှံပါတယ်
အရပ်ကောင်းပါ့မလား ငါ့အလောင်းလှဖို့ ‘သူဟိုရောဂါနဲ့ သေသွားတာလေ…
သေခါနီးမှာ မြင်ရက်စရာ မကောင်းဘူး’ ငါမသေချင်ဘူး၊ ငါမသေချင်ဘူး ငါ
မသေချင်သေးဘူး ငါဟာ အသက် ၂၀ ကျော်ပဲရှိသေးတယ် လူချောလေးပေါ့
ကဗျာတွေကျန်ခဲ့မှာပါ ပေါ့စတစ် ကမ္ဘာကြီးကျန်ခဲ့မှာပါ ပေါ့စတစ်
ပေါ့စတစ်ဟာအဖိုဓာတ်(+) နဂ္ဂတစ်ဟာ အမဓာတ်(-)
ကိုယ်ခန္ဓာအလေးချိန် ၁၀%ကျဆင်းလာမှု အရိုးပေါ်တင် အရေစုတ်ပြဲ
‘……..နှင့် အခြားကူးစက်ရောဂါပိုးများ ကာကွယ်ရန်လမ်းညွှန်’
ရောင်စုံဓာတ်ပုံတွေနဲ့၊ အင်္ဂလိပ်စာသားတွေနဲ့၊ ကြွေစက္ကူနဲ့
‘ဟော့ဂ်ျကင်းန်စ် လင်ဖိုမာ’ ကုသမှုအာနိသင်မတိုးတော့ဘူး
ငါ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ငါ့ကို မထမ်းထားချင်တော့ဘူးတဲ့
ကဗျာမဆန်တဲ့ငါဟာ ကဗျာထဲ ဘာဝင်လုပ်နေတာလဲ
ဘာလဲ၊ မ၀င်ရဘူးလား ကဗျာကိုကူးစက်သွားမှာကြောက်လို့လား
တွေ့ကြုံခံစားမှုရဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို တိတိကျကျ…..
လက်ကောက်ဝတ်ထဲ တဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေတာ သီအိုရီမဟုတ်ဘူး
ကိုယ်ခန္ဓာယိုယွင်းလာတာနဲ့အမျှ တဖြေးဖြေး ပြည့်လာနေတဲ့ လ
ခင်မင်မှု၊ ချစ်ခင်မှု၊ ‘တစ်သက်လုံး’တွေမှာ အနာစိမ်းတွေ၊ ကြွက်နို့တွေ
ငါတင်လာတဲ့ ကုန်တွေဟာ ကမ်းမကပ်မီ
ဒီသင်္ဘောဟာ ပင်လယ်ထဲမှာ မီးတွေလောင်မြိုက်နေတော့တယ်
မိ မလိုလိုနဲ့ လွတ်လွတ်သွားတဲ့ ဘာတဲ့ (?) ‘အမှန်တရား’
ရောမန္တိက မဆန်တဲ့ သရုပ်မှန်ဝါဒ အမျိုးအစား
မိုက္ကိုဘက္ကတီရီယမ် ကျူဘာကယူလေစစ္စ ၀င်ရောက်မှု
၃၀၊ မတ်လ ၂၀၀၇
မြင်တာနဲ့ကြည့်တာဟာ တစ်ထပ်တည်းမကျဘူးဆိုတာ ခင်ဗျားလည်းသိမှာပါ
အာရုံတွေဟာများလွန်း၊ မြန်လွန်းတော့ လိုချင်တာပဲစစ်ယူကြရတယ်မဟုတ်လား
ပိုခက်ခဲတာက ပိုမရင်းနှီးတာဖြစ်သလို ရင်းနှီးသွားလွန်းလို့လည်းဖြစ်တယ်/မယ်
Wales- ဝေးလ်စ် – ဝေလပြည် (ဗြိတိန်)
Whale – ဝေးလ် – ဝေလငါး
လမ်းပေါ်မှာ မြင်နေကျလမ်း၊ ပလက်ဖောင်း၊ သစ်ပင်၊ လူနေတိုက်ခန်းများ
လူများ၊ ကားများ၊ စက်သံများ၊ စကားသံများ၊ အားလုံးဇာတ်ဆရာအတိုင်းပါ
အမြင်ဆိုင်ရာ လေ့လာချက်နဲ့ အကြည့်ဆိုင်ရာလေ့လာချက်များ အစေးမကပ်သေး
အခန်းတံခါးကို ဖွင့်လိုက်တော့ တစ်ခုခုခံနေတယ်
နှလုံးခုန်နေတာလို့ ထင်ရတဲ့ အရေပြားဖောင်းလိုက်ချိုင့်လိုက်ဖြစ်နေပုံ
စုဆောင်းရရှိလာခဲ့တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ နောက်ခံရာဇ၀င်
၁။ လူမှုထုံးတမ်းစဉ်လာများတွင်ဝင်ရောက်ပါဝင်ပါရန် (လူရာဝင်ရန်)
၂။ သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ရန် (မှန်/မမှန် ဘေးဖယ်ထား)
၃။ ထိမ်းချုပ်မှုတစ်ခုခုလုပ်ရန် (ဘယ်သူလဲ၊ ဘယ်သူ့ကိုလဲ၊ ဘာကိုလဲ)
၄။ ခံစားချက်များ ကူးလူးမျှဝေရန် (မယုံဘူး)
၅။ မိမိကိုမိမိဖျော်ဖြေရန် (၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ရယ်ရတော့မလား)
မြင်သမျှ ကြားသမျှမှာ ကိုယ်ဟာ အပြင်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ပါပဲ
(ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၄နာရီအတွင်း သင်တွေ့ကြုံခဲ့သမျှကို တန်းစီရေးပြပါ)
ကုတင်အောက်မှာများလား ဆံပင်တွေထဲမှာလား ဘီဒိုနဲ့နံရံကြားလား
ကြားလား၊ အဲဒီ ဒုတ်ဒုတ် ဒုတ်ဒုတ် ဒုတ်ဒုတ် ဒုတ်ဒုတ် ခုနေတာ
ဝေလငါး…မဟုတ်ဘူး၊ ခင်ဗျားရဲ့ ရင်ဘတ် (ဘယ်ဘက်ထဲ)မှာ
မြို့ပြရဲ့ စိတ်ရောဂါတစ်မျိုးလိုထဲမှာ သူဟာဗီဇစိတ်နဲ့ကစဉ့်ကလျား
‘ဟဲလို၊ ပြောပါ ခင်ဗျာ၊ ကျွန်တော်ဟာလမ်းပေါ်မှာရှိနေပါတယ်’။ ။
၈၊ ဧပြီလ ၂၀၀၇
ထိုင်နေတာ ချိုင့်ခွက်တွေကြား ရပ်နေတာ ရာသီချို့ယွင်း
၃’ ၂” ၅အောင်စနဲက ခဏသာမြဲတဲ့အာရုံမှာ
တိရစ္ဆာန်လိုလို မသေမရှင်လိုလို ဇယားတိတ်ကြိတ်သွားတဲ့
ပူစပ်စပ်ညကို ခါးချိတ်ထားတဲ့ ပျင်းရိငြီးငွေ့မှုနဲ့သာ
စိတ်ဓာတ်အတွက် ဓာတ်ဆီလိုတယ် ရေသန့်ဘူးလိုတယ်
ဒီနေ့ ဓာတ်ဆီဘယ်ဈေးလဲသိလား ရေသန့်ဘူးထဲကပိုးလောက်လန်း
ရူပဗေဒရွေ့လျားမှုဟာ ပထ၀ီကြောထဲမှာ ခပ်တင်းတင်းနဲ့စပ်ဖျင်းဖျင်း
ဓလေ့ရဲ့အလေ့အကျင့်ရပွေ့ဖက်မှုထဲမှာ အမည်မဖော်သော ဖြစ်ညှစ်မှုတစ်ခု
အဖိတ်အစင်မရှိတဲ့ လေထဲ လေထီးခုန်လေ့ကျင့်
‘ကျွန်တော်တို့ပျော်ရွင်ကြပါတယ်။ ဒီမှာ မနက်ကိုးနာရီပေါ့’
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပဲ ဒီမှာ မိကျောင်းတစ်ကောင်
ခရီးသည် ၁၇ဦးသေ ၄၁ဦး ဒဏ်ရာရ ယာဉ်မောင်းရှောင်တိမ်း
အစစ်အမှန်အဖြစ် သင့်ထံပြန်လာဖို့ ကျွန်တော်တို့တာဝန်ထား
ရှုခင်းသက်သက်အတွက် ရောက်လာကြတာတော့ မဖြစ်တန်ဘူး
သူငယ်ချင်း တင်းပုတ်ကြီးထမ်း ငူငူကြီးထိုင် ယိုင်ယိုင်ကြီးမတ်
ရပ် ခွေလဲ ပြန်ထ မျက်စိပွတ်
ဗိုက်ထဲက အသံနဲ့ပဲမှန်း။ ။
စူးရဲ့လောင်ကျွမ်းနေတာ ဘာတွေမှမဟုတ်ဘူးလို့ ဘယ်သူထင်မလဲ
အနီးကပ်ဆုံးပိုင်ဆိုင်ရတဲ့ အချိန်ထဲမှာ သင်လည်းမျက်နှာပြင်တွေအက်ကွဲ
ညနေ ၆း၀၀ နာရီမှာဖြစ်ဖြစ် တစ်ဝက်တစ်ပျက်ဘ၀ထဲကဖြစ်ဖြစ်
သွားကြရတာပဲမဟုတ်လား နေလို့မရတဲ့ အနေအထားတွေပုံပြောင်း
ပြောင်းလို့မရတဲ့ အနေအထားတွေဟာ အလင်းမှိန်ထဲမှာ
အတွေးရဲ့ညနေခင်းနောက်ခံမှာ မြစ်ဟာ ပေါလောမျောလို့
အဲဒါနိမိတ်ပုံလား အဲဒါဖလင်ပြားပေါ်ကတစ်စ တစ်စ
ဘလက်အင်ဝှိုက်လား မီးခိုးလား တစ်ယောက်ကအရောင်နဲ့
လမ်းတွေပေါ် လူကျဲချိန်မှာ တိတ်ဆိတ်မှုဟာထမင်းထုပ်လေးနဲ့
ငါလည်း သူ့မလှမ်းမကမ်းမှာ မလာခြင်းကိုစောင့်လိုက်တယ်
ဟာလာဟင်းလင်းရဲ့ အိပ်ကပ်ထဲ တစ်ခုခု ထိုးနှိုက်နေသလို
ဘ၀ဟာ ပုလွေတစ်ခုဆိုရင် အပေါက်တွေထဲ
မြို့ပြသံတွေ ငယ်သံပါတွေ မြိုထားတဲ့ အသံတုန်ခါမှုတွေ
ပလာချွတ်ထားတဲ့ အသံသက်သက်တွေ အဓိပ္ပာယ်ပြေးစွတ်ကြ
ခံစားမှုဟာ ကြွက်သားတစ်ချောင်းဆိုရင် အဲဒီကြွက်သားနဲ့ပဲ
ပကတိကာလထဲ ရေပုံးပစ်ချခပ်လိုက်သလို ဘာတွေပါလာသလဲ
စိတ်အရွေ့တစ်ခုရဲ့ ကြိုးအလျားနဲ့ ထုအတိုင်းစံပြုမရ(?)
အတွေးရဲ့ ကြမ်းပြင်မှာ တံခါးတစ်ချပ်မှောက်လျက်ကြီး တွားသွား။ ။
ချောချောမွေ့မွေ့ပြောချင်ပေမယ့် အချိန်ကတိုပြီး ငြီးငွေ့ခြင်းက ရှည်လျား
ပြောဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကြားက လိုရင်းစကားလုံးတွေ အစေးမကပ်ကွာကျသွား
အဲဒီမှာလည်း ဟောင်းနိုင်ရန်ကောကွယ် မည်းမည်းမြင်
အမြီးက ခွေးကိုနန့်သလို အလူလိုဟောင်လိုခြင်းက ငါ့နှလုံးသားကို ဝှေ့ယမ်းလို့
လက်က အပေါက်မှာကပ်နေတာကို လက်ပေါက်ကပ်တယ်လို့ ပြောချင်ပြော
အဲဒီအပေါက်ကိုပဲ ဖြည့်ဖြည့်နေတာ မသိစိတ်ထဲမှာ တစ်ခုခု ဖာနေတာလား
အရှေ့အနောက်တောင်မြောက် ထောင့်တိုင်းမှာ အတောင့်သား ဒေါသတွေ
ချေပစ်လိုက်လို့ရတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ အမဲလုံးကျွေးလိုက်လို့ရတဲ့ စိတ်ဟာ ၀ါကျကွဲပြား
ငါ့စိတ်ခံစားချက်တွေကို ငါမြင်တယ်ဆိုတာ အမှောင်ထဲပစ်ခံရတဲ့
လောက်စာလုံးတွေပါပဲ နာတော့နာတယ်ဟေ့ ဘယ်ကောင်လဲကွ
ငါခံစားရတာဟာ ငါခံစားရတာပဲ အဲဒါမုသားမဟုတ်ဘူး လင်္ကာ
မချော်ရင်နေပလေ့စေ ကဗျာဆန်ချင်နေတာ မဟုတ်ဘူး မချောမွေ့လည်းနေ
နေနေရပြီး ကြည့်ကြည့်ပြောကြည့်နေရတာပဲမဟုတ်လား အိပ်ပစ်ချင်လိုက်တာ
နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ပေမယ့် အိပ်စက်ခြင်းကိုပါ ၀ါးတံတားထိုးပြီး
ကြယ်တွေဟာ ပြဋ္ဌာန်းပြီးသား တည်ဆောက်သတ်မှတ်ခံတွေလို့ သိသိချင်းမှာ
အလှတရားဟာ ကြည့်သူ့မျက်လုံးထဲမှာ ရှိတယ်ဆိုတော့ အဲဒီမျက်လုံး
ကို ဖောက်လိုက်ရင် အလှတရားကို အရှင်ရမလား အသေရမလား
ငါ့အမှတ်ရမှုထုထည်ထဲမှာ ဘာပဲသီးသီး အသီးသီးအသကဟာ
ပြန်လည်ပြုပြင်ထားတဲ့ သရုပ်ထဲမှာ အရုပ်ကြိုးပြတ်တွေပဲ ဖြစ်ခဲ့ပြီ
ဒါကဗျာမဟုတ်ဘူး ကဗျာဆိုတာ ငါတို့နဲ့ဝေးရာမှာ ငါတို့ရဲ့အနံ့တွေနဲ့
ဝေးတဲ့လေဆန်ဘက်မှာ ငါတို့ရဲ့မှိုင်းခံစက္ကူပေါ်က မှိုင်းတိုက်ခံအရေးအသားတွေပဲ
ရှိတဲ့ ထင်မိထင်ရာ ကျင်မိကျင်ရာ နင်မိနင်ရာမှာ ရှင်မိရှင်နေတာ အဆန်းလား
အရေပြားတွေ လျော့ရဲလာ အကြောတွေပေါ်လာ အရိုးတွေဟာ အရိုးပိုဖြစ်လာ
နေတဲ့ အဆောက်အအုံမှာ နေအကြိမ်ကြိမ်စား မာနမွဲခြောက်နဲ့
ခေါင်းမကောင်းတော့တဲ့ စဉ်းစားတွေခေါ်နေထိုင်နည်းရဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့
(ဘာတရားလဲပြော၊ တရားတိုင်းတရားတယ်မထင်နဲ့) အဲသလို
ကိုယ်ပေါ်ဘ၀၀ဲနေတဲ့ အရိပ်မည်းကြီးရဲ့ သဒ္ဒါစနစ်ထဲမှာ ငါလိုချင်တာ
ငါလိုချင်တာ ဘာမှမရှိတော့ပါဘူး ငါဟာ ဖွဲ့ထုံးထဲမှာ ‘အောက်ကမြစ်’လောက်ပေါ့
တအိအိပြိုကျလာနေတဲ့ ကမ်းပါးမှာ ရာသီဥတုဟာလည်း မေးခွန်းဖြစ်ခဲ့ပြီ
မြစ်တစ်ပြင်လုံး ငါးသေပုပ်တွေ ပက်လက်မျောကြား
ဟောသလို လှေကလေးတစ်စီး တက်လေးတစ်ချောင်းနဲ့
ကြယ်တွေကို ငါမယုံတော့ဘူး သူတို့မှာ ခဲဆိပ်တက်နေတဲ့ အလင်းသရွတ်နဲ့
ငါဟာ ငါမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာလည်း ငါ့ သမ္ဗန္ဓတွေ တပြုတ်ပြုတ်မှာ
အဲဒီတုန်းက သူနဲ့ငါ ချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့ကြသလား။ မိုးသည်းတွေကြားမှာ သူနဲ့ငါ
မှတ်မိခဲ့ကြသလား။ မှတ်မိနေတုန်းလား။ နေသားကျဇာတ်လမ်းတွေဟာသိပ်
တင်းကြပ်မနေပြန်ရငလည်း ဇာတ်အိမ်တွေဟာ အချိန်စီးကမ်းပြို၊ ပြန်ပြန်
တည်ဆောက်နေရခြင်းထဲမှာ ဘ၀ဆိုတာကို လိုလိုမလိုလို အားကိုးသုံးစွဲလို့။
အာမေဋိတ်တွေနဲ့ပဲ စကားပြောလို့မရဘူးလား။ မဖွယ်မရာ ဖြောင့်ချက်တွေ၊
မမြင်ကွယ်ရာကိစ္စတွေကို အမှန်/အတိုင်း(နီးပါး) ဖွင့်ဟ၀န်ခံဖို့။ ပြင်သစ် ဇာတ်မြစ်။
ဒီမှာ အတွယ်ခက်။ အတွယ်အတာခက်။ ခက်တာကို တွယ်တာ သလိုလိုနဲ့
အခက်ကိုပဲ ပင်စည်တစ်ခုအမှတ်နဲ့ တွယ်ခဲ့တွယ်နေတာမဟုတ်ရင် အခြားဘာကို
…။‘ခေတ္တလမ်းပိတ်ထားပါသည်။ ‘ဘာဆက်လုပ်ရမလဲသာ မသိတာ၊ အဲဒါတော့
လုပ်ကိုမလုပ်ချင်ဘူး သိလား။ ကြောက်တယ်။ အိပ်
မက်ဆိုးကြီး’။ ပြီးတော့လည်း ‘ထုံးစံ’ (လို) အတိုင်းပဲလား မမှတ်မိတော့။ လွန်ခဲ့တဲ့
ဆယ်နှစ်က ကိုယ်က ၄၀ တွင်း၊ သူကအပျိုဖြန်းဖြန်း။ အဲဒီတုန်းက ဆင်မြန်းကြတဲ့
စကားလုံးပုံစံတွေက တစ်မျိုးပေါ့။ ကိုယ့်ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဆိုတာ မခိုင်မာသေး
သလို သူ့မှာဘ၀ရှိတယ်ဆိုတာတောင် သူက လက်ခံချင် ပုံမရသေး။ ခုန်တက်လိုက်
တာလား၊ ခုန်ဆင်းလိုက်တာတား။ အဲဒီသဒ္ဒါထဲမှာ လည်ပတ်နေတဲ့ နှလုံးသားတို့
သွေးသားတို့၊ အလင်းတို့၊ အင်အားတို့၊ ရိုးသားမှု(?)တို့၊ အစစ်နဲ့ အမှန်ကြား
ကွာခြားချက်ပေါ် မျက်စိစုံမိတ်တံတား ထိုးပြီး သက်တံခင်းကျင်းတာတို့။ အခုတော့
ရယ်ပစ်လိုက်ဖို့ အလွယ်လေး။ ရယ်ဖို့သာခက်ခဲ။ ငါတို့ ချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့ကြဖူးတယ်။
အောင်မြင်မှုသတ်မှတ်ချက် ပျက်ပြယ်မှာပဲ။ ဆိုတာဟာ အခု ပြန်တည်ဆောက်
ကြည့်တဲ့ကြားက အပေါက်အပြဲကြီးတွေနဲ့။ သူ့ အဲဒီတုန်းက အပျိုရည်လတ်လတ်
ဆတ်ဆတ် ပျက်ပြီးစမျက်နှာပေးလေး။ ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက် အဲဒီ( ပြန်မြင်သလို၊
ပြန်ဆင်သလို) မျက်နှာပေါ်မှာ စကားလုံးတွေဟာ အကွက်လိုက် အကွက်လိုက်။
၉၊ မေလ ၂၀၀၇
ငါ့ဇာတ်ကောင်ကို ငါ အကောင်းဆုံးတွေပဲပေးချင်တယ်
ကိစ္စမပြီးတပြီးမှာ တောင်ကုန်းအမှတ်( )ရဲ့ အထက်စီးကနေ
ပွိုင့်တစ်ခု ကိုယ်ရလိုက်တယ် ဟောဟိုမှာ
အမှောင်ဖုံးတွေထဲတစ်ယောက်က အပြင်ထန်ဆုံးအသုံးအနှုန်း (သူ့ထင်မြင်ချက်)
တစ်ယောက်က စကတည်းက လုံးလုံးလွဲမှာ(ရူးသွပ်၊ သွက်ချာပါဒ)
ပင်မရေစီးကိုသဲကော်တွင်းတူး ကတုတ်ကျင်းပြုလို့ ကတုတ်ကျင်းဝမှာ
စစ်ကူတောင်းနေ ဆိုင်းထိုးခိုင်းနေ ၆-၀/ ၆-၁ နဲ့ ချောင်ချောင်ချိချိနိုင်နေ
လုပ်ပြီးသားတွေဆီ ခဏခဏပြန်လာရ(သလို) ကောင်းကင်အဖုံးကို
အခြေတကျရေသေ ဘယ်သူဟာ ရှေ့ပွိုင့်နောက်ပွိုင့် ဘယ်သူဟာ အဓိကပစ်မှတ်
စကား(ဦးနှောက်)ကို တစ်လမ်းသွား တစ်ကြောင်းတွေ အပိတ်စနစ်နဲ့ စံနမူနာနဲက
ခွဲစိပ်စင်ပေါ်တင်ရမယ့်အစား ရောဂါမှတ်တမ်းကို ခံစားနာကျင်လို့/ကြင်နာလို့
မီဒီယာမီဒူဆာဟာ ပုံမှန်ဝဲ၊ ပုံမှန်အလုပ်လုပ်၊ ပုံမှန်အလုပ်ရ၊ ပုံမှန်ရန်လုပ်ရ
‘အစစ်အမှန်’ကို ကိုက်ခဲထားပြီး ကိုက်စားမရ မြှုပ်မရနဲ့ သွားရည်တမြားမြားထ
ဟုတ်ကဲပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်များကဗျာဟာ မကြာမီမှာ
အနှောင့်အယှက်ပေးသော တင်ဆက်မှုများ၊ မကြုံစဖူးသော အသုံးအနှုန်းများ၊
မ၀င်သောအရေးအသားများ မပါရှိကြောင်း ပေးထားတဲ့ဖောင်ပေါ်မှာ
ဆိုင်းထိုးပြီး သက်ဆိုင်ရာရဲ့လက်ထဲ ရိုသေစွာအပ်နှံပေးကြပါရန် ထပ်မံသတိ
ဘာဖြစ်နေတာလဲ ဘာဖြစ်ခဲ့ပြီလဲ ဗီယက်နမ်စစ်တုန်းက အမေရိကန်တွေ
တစ်ကွင်းလုံးကိ တစ်ကွက်တည်းမြင်ဖို့ အာခိမိဒိအမှတ်စက်ဘယ်မှာ…
သမုဒ္ဒရာဒီဘက်ကမ်းကနေ ဟိုဘက်ကမ်းမှာ ဘာရှိမလဲ
ဘယ်လိုလမ်းကြောင်းရှာမလဲ ဘယ်သူတွေ တွေးဖူးသွားဖူးသလဲ
‘မြေပုံဆွဲပြချင်တာထက် ရှိရင်းစွဲရုပ်ပြောင်တွေကို ပုံတူတွေလို့
ထင်လာမှာကို ဖျက်ပစ်ဖို့ မြေနိမ့်မှာမြုပ်သွားတဲ့ ကဗျာဧရိယာတွေကို
မြေလွတ်မြေရိုင်းပါမကျန် စိတ်ကူးဉာဏ်နဲ့ စိမ်းလန်းဖို့’
ဒိုင်နိုဆောဟာ ဒေါသကြီးတယ် စာမဖတ်တတ်ဘူး Focus ကို
တစ်မြေတည်းပေါ်မှာ တစ်ရေတည်းသောက်တဲ့ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု
သူစိမ်းတွေ လှုပ်ရွနေတဲ့ မြေကြမ်းလည်းဖြတ် ဘာကိုဝမ်းနည်းနေရမှာလဲ
စစ္စတမ်နဲက သီအိုရီထဲ(က/ကို)ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အမှုန်တွေလှိုင်းတွေ
ပြုလုပ်ထားတဲ့ ရေထဲက ပြုလုပ်ထားတဲ့ငါးက ပြုလုပ်ထားတဲ့ မျှားတံနဲ့
၀မ်းအတွက် ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဖမ်းနည်း/ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနည်းများနဲ့
ခံစားမှုကေဒါတွေ အော်နေတဲ့ မိုးဟာ ဘာအရောင်လဲ ဘာအမျိုးအစားလဲ
နေခင်းကြောင်တောင်မှာ လင်းနို့လို စာမျက်နှာကို ၀င်တိုက်ကြ
စာမျက်နှာ=စာသားရဲ့ စီမံထားတဲ့ မျက်နှာစာ
ယနေ့ကမ္ဘာကြီးဆီ တရားဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အတွက် မင်္ဂလာပါ
မနက်ဖန်မှာလည်း ရုပ်သံကြည့်ပရိသတ်နဲ့ ကျွန်တော်တွေ့ချင်ပါသေးတယ်
ပြုလုပ်ပြီးသား ငါတို့ကို ငါတို့မပျင်းမရိ အသောမသတ်မရပ်မနား
ထပ်မံပြုလုပ်ပြီးရင်း ထပ်မံထပ်မံ ပြန်ပြန်ထုတ်လုပ်ကြပါစို့
သေမသေ သေချာအောင် နှစ်ခါပြန်တိုက်ရမယ်ဆိုတာမျိုး ပြတိုက်ထဲမှာ
သမိုင်းဝင်လိုင်းဝင်ဓာတ်ပုံတွေ ရပ်နေပုံတွေ ထိုင်နေပုံတွေ လှဲနေပုံတွေ
ဆပ်ပြာတွေ၊ ရွှေသွားတွေ၊ ဒိုင်ယာရီတွေ၊ မဟုတ်ကြောင်းငြင်းဆိုမှုတွေ
အန်ထရိုပေါလောဂ၊ ဂဲအောလောဂတွေနဲ့လည်း မကင်းတဲ့ လောဂလောကတွေ
လောကလောဂတွေထဲ ဘ၀အမြစ်တွယ်မှုတွေ ခုတ်လှဲမှုတွေ တင်ပို့ရောင်းချမှုတွေ
နှောင်းအရင်းရှင်နဲ့ နောက်ကျအရင်းရှင်ဟာ အင်္ဂလိပ်မှာတော့ ‘Late’ ‘လိပ်’ပဲ
Late capitalism မှာ စကြ၀ဠာဆိုတာ ဓာတ်မဟုတ်ဘူး
မော်လီကျူးတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာ ခင်ဗျားကေ ဘာမျိုးရိုးဗီဇလဲ
ဖားတို့ရဲ့ မျက်လုံးတည်ဆောက်ပုံ အဆင့်ဆင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုသမိုင်းထဲမှာ
အစိပ်စိပ်အမွှာမွှာ အပိုင်းပိုင်းအစစ ဇာတ်လမ်းပြောပစ္စည်းတွေ၊ နည်းတွေ
ကြည့်ဦး…..အဲဒီမှာ ‘မူလ’တံဆိပ်တွေ ပါရင်ပါနေဦးမယ်
‘ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးကို ဆိုးဝါးစွာ
ထိခိုက်နိုင်ပါသည်’ စာတန်းဟာ ဆေးလိပ်ဘူးခွံဘေးမှာ
ဆေးလိပ်အမည်လောက် မကြီးဘူးဆိုတာ ဘာကြောင့်လဲ သတိပြုပါ
အဲသလိုပဲ အကောင်ဟာ အထည်မပေါ်တာတွေပေါ့
၁၀၊ မေလ ၂၀၀၇
ဒါဟာလည်း ရင်းနှီးပြီးသားထင်ရတဲ့ သူစိမ်းဆန်မှုတွေပေါ့
စက္ကူပေါ် စက်ဆွဲသွားတဲ့ အတိုအရှည်မညီ လိုင်းတွေ
လျင်လိုက်တာမှ ‘ငလျင်’ကို မြည်နေတာပဲ
ဘယ်တော့မှ မတွေ့ရတော့ဘူးလို့ စိတ်ကို မင်တုပ်ခင်းပြီးမှ
ရင်ခုန်သံကို ဘယ်လောက် ဟန်ဆောင်မှုမှာမှကြားရသလဲ
‘ကြုံမှသိ’ နဲ့ ‘ထိမှနာ’ ဟာ ကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုလား
ပန်းသီးလည်း ရာဇ၀င်ပင်ကသီးပြီ ကြွေရတာပဲမဟုတ်လား
မီးတောင်သေလည်း အကြောလှုပ်တာက စ တာပေါ့
အထဲမှာ ဘာမှ မရှိဘူး)
စနစ်တကျလှပတဲ့ ပါဒမဟုတ်တောင် ၀ါကျပေါ့
ဒါပေမယ့် အ၀ှက်လည်းမခံကြတဲ့ အ၀ှာတွေ
မင်းနဲ့ငါလည်း လုပ်ယူခဲ့ကြတာပဲ မဟုတ်လား
ငါ့ရဲ့အတွင်းကိုသိမ်းပြီး ငါ့ရဲ့အပြင်ကို ပိုက်မယ်လို့များ
အိုက်ဒီယော်လော်ဂျီနဲ့ မကင်းတဲ့ အထိအတွေ့တွေ
မင်းပြောတဲ့ ဒီအချစ်ဆိုတဲ့ ပရောဂျက်မှာ
ဤတွင် ၀င်စေ စည်ပင်စေ
‘သူဟာ တကယ်ပဲ မင်းအပေါ်မှာ….’
အရေအတွက်တွေ အချက်အလက်တွေ ဘယ်နှချက်မ ပြီးမှာလဲတွေ
ရူပဗေဒမှာ ထူးဆန်းတဲ့ အမူအကျင့်နဲ့ ဆဗ်အက်တမ်အမှုန်တွေ
အဲဒီမှာ သူ့စကားဟာ အဓိပ္ပာယ်ဝဲလာတယ်
တောင်ကြီးက လျောင်ကီး မောင်ဖီးလို့ နာမည်ပြောင်းလိုက်သလို
မင်းနောက်ဆုံး ရောက်ခဲ့သလဲ။ ။
၁၄၊ မေလ ၂၀၀၇
‘ချောင်နေတယ်’တဲ့ ‘အစစ်ပဲ’ တဲ့၊ စကားလုံးတွေပါ
သူ့အတ္တပွဲရုံတွေ ဒိုင်တွေ အကုန်လုံးကိုတဏှာရောင်သုတ်လို့
အထူးဈေးကွက်အာရုံရလို့ မရောင်းတဲ့ပစ္စည်းဟာ တံခါးလက်ကိုင်ဖုတွေ
လက်သည်းညှပ်၊ ပုလင်းဖော့ဆို့ဖွင့်တံ၊ ဂဏန်းလက်မ ညှပ်ခွဲတဲ့ ပလာယာစသည်ဖြင့်
အထုပ္ပတ္တိဟာလည်း ဆယ့်တစ်လထိ ဘက်ဆဲလား၊ ကျောင်းတွေမှာပြဋ္ဌာန်း
ရာဇ၀င်တွေ သမိုင်းတွေ ဟိုတုန်းကသူတို့မမီလိုက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ
အလုအယက်ဝယ်ကြတာပဲပေါ့ဗျာ၊ ကားကြီးကားငယ်တွေက ဆင်းလာပြီ
သစ်ပင်တွေ၊ ခေါင်မိုးတွေ၊ အိမ်တွေ၊ လူတွေပါကြလိမ့်မယ်
ဒါပေမယ့်ဒါဟာ ဒါနဲ့မဆိုင်(သေး)တဲ့ အခြားကိစ္စတစ်ခုပါ
ရတနာကြုတ်လေးနဲ့ လူကြီးမင်းရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို
၂၀၊ မေလ ၂၀၀၇
ပြီး ကြံရာမရ နွယ်ပင်နှာမောင်းတွေလို
တွယ်စရာမရှိ အချင်းချင်း ပြန်လိမ်
တစ်သွားပဲ ခပ်သွားသွား သွားနေလိုက်ကြတာ
မိုးရဲ သိပံ္ပကို အလိုတူ
အဲဒီအစိုင်အခဲကို အရည်ဖျော်ကြည့်။ ။
၅၊ ဇွန်လ ၂၀၀၇
၀င်စားဖွယ်ရာ မဖွယ်ရာရာ ဖွယ်ရာရာ
ဖိတ်ခေါ်လိုက် ပါဝင်ကစားမယ့်သူတွေရဲ့ စာရင်း
‘ဟုတ် သမီးတို့လို အနုပညာအတွေ့အကြုံ
ဟေ့ စည်းကြပ်ဒိုင်တွေ ဘယ်မှာလဲ
ဟေ့ ဟေ့ စတန့်တွေ ပါပြီးပြီလား
ဆွေမျိုးတော်စပ်နေတယ်လို့ မီးမှိန်မှိန်လေးမှာ တွေ့ရှိရ
ဟေ့ ၊ စည်းကြပ်ဒိုင်တွေ
ကျွန်တော်က အသည်းမာတယ် (ဘယ်ကျွန်တော်လည်း မသိ)
ခံစားချက်တွေဘာတွေ သိပ်ဟုတ်တိပတ်တိ မရှိဘူး
စကားလုံးတွေကို တုတ်နဲ့ထိုးကြည့်တယ် အစောင့်တွေအလစ်မှာပေါ့
အယူအဆ (အယူအဆနဲ့ အယူဝါဒ ဘာကွာဟသလဲ)ရေးရာတွေ
ငြင်းခုန်တဲ့အရက်ဆိုင်မှာ အိမ်မှာ ရိုက်ခွဲလိုက်တဲ့ ကားမှန်ကွဲစတွေမှာ
ကွဲပြားခြားနားတဲ့ စဉ်းစားပုံမျိုးပြတဲ့ ကဗျာတွေကို
ဟေ့၊ စည်းကြပ်ဒိုင်တွေ၊ စည်းကြပ်ဒိုင်တွေ
ဗဟိုမှ ဖြာထွက်မှုအား လေသေထဲညပ်နေသောကြောင့်
မာခဲ့နေတဲ့ တရားသေစဉ်းစားနည်း အုပ်စုဖွဲရမ်းကားနေသောကြောင့်
‘ဒါကို ဘယ်လိုဖတ်ရမလဲဆိုတဲ့ ကိစ္စလေးကျန်ရှိနေသေးတဲ့အတွက်
ဒါကိုကဗျာတစ်ပုဒ်လိုပဲ ဖတ်ကြလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်
ကျွန်တော်သည်၊ သင်သည်၊ သူသည်(လက်ခုပ်လက်ဝါးများ ဖျောင်းဖျောင်းဖျောင်း)
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်လို့ ဘာသာစကားဟာ တစ်ခုခုသိနေသလိုပဲ
ဒါပေမယ့် ဘာသာစကားဟာ အ,နေတော့ သူလည်းအလိုတူအလိုပါပေါ့
လူကျွံတာတွေ၊ လူလဲတာတွေ၊ လူလုပ်တာတွေ၊ လူညစ်တာတွေ
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ သရုပ်ဆောင်သင်တန်းတက်ချင်လို့ပါ
သြော်…..အေး၊ အေး မောင်လေးတို့ ညီမလေးတို့ ဒီဖောင်တွေဖြည့်လိုက်နော်
ဖောင်ဖိုးကတော့……..အဲ၊ ကြုံတုန်း အလှူငွေလေးလည်း…………
တစ်ထေရာတည်းတူအောင် အတုပြုလုပ်ချက်နဲ့ ရီယစ်လစ်ဇင်နဲ့
၈၊ ဇွန်လ ၂၀၀၇
(ယခင်က မီးသတ်ကားတွေ အခုလို အဆင်မျိုးတွေကြားမှာ
ကပ်လျက်ရှိ အခြားအစုအဖွဲ့များရဲ့ လောင်စာပမာဏ
ဟုတ်တယ် ၅၃.၈% လောက်ပဲလိုအပ်တယ်
ပတ်ပတ်လည်မှာလမ်းလိုလို ပိတ်ဆို့မှုမရှိတဲ့ လမ်းဟာ
သက်သေဟာ လမ်းပေါ်မှာ မီးလောင်မြိုက်သွားတယ်
အတွင်းစည်း၊ အပြင်စည်း၊ စည်းခြား၊ စည်းကျော်
ရုပ်ရှင်ရုံတွေရှိတဲ့ဘက် ဦးတည်ရာ (ဘာသာစကားတည်ဆောက်ချက် ၃)
ဒီမှာ ကားတွေ လူတွေ တိမ်တွေ ငှက်တွေ အကုန်လုံးရပ်
ခင်ဗျားလက်ပတ်နာရီဟာ သုံးနာရီတိတိတဲ့ တိတိ တိတိ တိတိ
၁၅၊ ဇွန်လ ၂၀၀၇
ဒီနေ့ကလေးဟာ ယိုယိုမားရဲ ချယ်လိုတယောကြီး
လို သူ့အသံနဲ့သူ တံတျာတေးသီချင်း
မွန်ဂိုတွေ၊ တာတာတွေရဲ့ ရန်ကင်းပါစ
ရသစုံ၊ ရသထူးတွေ နည်းနည်းစီဖြစ်ဖြစ်
ကဗျာပါပဲတဲ့ နယ်နိမိတ်တွေကို ဖြတ်ကျော်တံတားထိုး
ဒီနည်းနဲ့ပဲ ပျံသန်းသူ ဒဲဒလပ်စ်ဟာ
နေလုံးကို ရင်ထဲပိုက် သမုဒ္ဒရာထဲ ခုန်ဆင်းသွားတာပေါ့
သူဟာ အဲသလို ဂျူးတစ်ယောက်ပါပဲတဲ့
‘ကျွန်တော့်လက်နဲ့ ကျွန်တော် ဘယ်ဂျူးတစ်ယောက်မှ မသတ်ခဲ့ပါဘူး
ကျွန်တော်ဟာ သြရှဝစ်ဇ် ဂျူးသုတ်သင်ရေးစခန်းရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်တာဝန်ကိုတော့ ကျွန်တော်ကျေကျေပွန်ပွန် ထမ်းဆောင် ရမှာပဲပေါ့’
ဟွက်စ်ရဲ့‘တာဝန်’ကို သမိုင်းက မမေ့သလို
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၂၀၀၀ က တရုတ်ပြည်ကြီးဟာ
အဲဒီတုန်းက ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အရောင်အသွေးတွေနဲ့
မသိလိုက် မသိဖာသာ ဘ၀ကို ထွန်းလင်းပေးခဲ့တာပါပဲ’
ဒီနေ့ကလေးဟာ အဲသလိုလည်း ဆိုပြန်တယ်
သူနှစ်သက်တာက ‘လှပတဲ့ အကွပ်မဲ့မှု’တဲ့
သူ့အသံ၊ သူ့ဌာန်၊ သူ့မာန်မှာ ဒင်တောင့်တောင့်တွေမပါဘူးတဲ့
မယုံရင် အလုံသီရိမင်္ဂလာဈေးမှာ သွားကြည့်ပါတဲ့
အဲဒီမှာလည်း စကြ၀ဠာတစ်ခု၊ ကြယ်တာရာစုတစ်ခု
ရွေးချယ်စရာမရှိဘူးဆိုတဲ့ စကားကို ခြင်းကြားထဲက
မမှည့်သေးတဲ့ သဘောင်္သီးစမ်းတွေတောင် မယုံဘူးတဲ့
သူတို့မှာ ဖြတ်ကူးစရာ ပင်လယ်သစ်တွေရှိသေးတယ်တဲ့
ဒီနေ့ကလေးပေါ့ ရိုးရိုးအေးအေး ဒီနေ့ကလေးပေါ့
ပုံစံခွက်ပြင်ပကနေ ပုံစံခွက်ကို အနီးအဝေး ဘယ်လောက်ပြေးတယ်
အဲဒါ သူ့နှလုံးသားရဲ့ သွေးပေါင်ချိန်ပါပဲတဲ့
အဲဒါ ဒီနေ့ကလေးရဲ့ သွေးပေါင်ချိန်ပါပဲတဲံ
ကိုချောရဲ့ သွေးပေါင်ချိန်ဟာလည်း သူပါပဲတဲ့
ဒီနေ့ကလေးဟာလည်း ခင်ဗျားကိုလည်း ကိုချောပါပဲတဲ့
ခင်ဗျားရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ သူအမြဲရှိပါတယ်တဲ့
မိမိရရ ဒီနေ့ကလေးပဲပေါ့။ ။
၂၂၊ ဇွန်လ ၂၀၀၇
၂၀၀၇ ပရူးဖရောက့်ရဲ့ အချစ်တေး
ငါ ဘယ်ဘက်က တိုက်ပေးရမလဲ မလင်းပြာ။
ကိုးကား (၁) T.S Eliot ရဲ့ “The Love Song of J. Alfred Prufrock”
ကိုးကား (၂) မောင်သိင်္ဂါရဲ့ ‘မလင်းပြာ’။ ။
၂၆၊ ဇွန်လ ၂၀၀၇
ဥပမာ၊ဘ၀ဟာ နံရံတွေမရှိတဲ့ ဇာတ်အိမ်အကြောင်းထိုးဇာတ်ပဲ
ဥပမာ၊ တစ်စုတစ်ဝေး မပေါင်းစပ်ချင်တော့ဘူးတဲ့၊ အဲဒါ ‘ကိစ္စ’
ဥပမာ၊ ဒါကိုလည်း သင့်အလိုကျ‘ဇက်ပ်’လိုက်ပါ
ဥပမာ၊ သင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့သင် အနီးကပ်ဆက်ဆံပြီးပြီလား
ဥပမာ၊post – ခင်ဗျားဟာ ဘယ်တံတား(၀ါ)ဘယ်စကားရဲ့ သဒ္ဒါလဲ
ဥပမာ၊ စစ်တက္ကနိုဟာ အမှောင်ထဲမြင်ဖို့၊ စစ်တက္ကနိုဟာ မသိစိတ်ထဲဝင်ဖို့
ဥပမာ၊ဗဟိုချက်အယူအဆကို စဖျက်တာ ရသပဲ
ဥပမာ၊ ‘သမိုင်းဟာငါ့ကိုခွင့်လွှတ်မှာပါ’တဲ့၊ ငါဟာ သမိုင်းကိုခွင့်မလွှတ်ဘူး
ဥပမာ၊ဒါဟာ ဘာလည်ဆည်မှုရဲ့ အလီဘိုင်လဲ
ဥပမာ၊၀န်ထုတ်ဝန်ပိုး အပျက်ဖြစ်အ ကြွေ့တုံစံခါးမှုကြုံလှီမှု
ဥပမာ၊သံဇကာကွက်ပေါ်မှာ အချိန်၊နေရာ၊နဲ့ ခံစားမှုသဲပိရမစ်၊ Helloတဖြေးဖြေး
ဥပမာ၊ခင်ဗျားလက်ထဲမှာ လတ်ဆတ်တဲ့ဖြစ်နိုင်ခွင့်တွေ၊ပေါင်ပေါ်မှာ အမွေးသပ်
ဥပမာ၊ ထင်ဟပ်မှုနဲ့ပြန်လည်ဖော်ပြမှုကြားမှာ ခင်ဗျားရဲ့ပေါက်ကွဲလွင့်စင်မှု
ဥပမာ၊အမ္ဗီဂွီတီ(Ambiguity)မလိုချင်ဘူး၊ ဟုတ်စ၊ ဘ၀နဲ့စကား
ဥပမာ၊ဒီထဲမှာ နိမိတ်ပုံမပါဘူးလား၊ အလင်္ကာမပါဘူးလား၊ကဗျာမပါဘူးလား။
ဥပမာ၊လူတစ်ယောက်ဟာ မသေသေးဘဲဆုံးလို့ရလား။ ။
၁၊ ဇူလိုင်လ ၂၀၀၇
မှတ်ချက်။ ။ (၁)‘ဇက်ပ်’လုပ်ခြင်း=Zapping။ TV ချယ်နယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကို remote control နှိပ်ပြီးအဆက်မပြတ်ပြောင်းကြည့်ခြင်း။ ချယ်နယ်တစ်ခုမှ ပြနေတဲ့အကြောင်းအရာရဲ့ဆင်ထားပုံကို ဖြတ်ပြီး အခြားချယ်နယ်တစ်ခုမှာ ပြသနေတဲ့ အကြောင်းအရာ အပိုင်းအပြတ်နဲ့ ဆက်စပ်ယူခြင်း။ ချယ်နယ်တစ်ခုမှာ ပြနေတဲ့ အကြောင်းအရာရဲ့ မဟာဇာတ်လမ်းကြီးကို ကြည့်သူက ခါးဖြတ်လိုက်ခြင်း။
(၂)(ကို)သည်မော်နိုင်ကို မနက်ဖြန်အထိ ကျေးဇူးတင်ရှိခြင်း။
ပြန်စရာအိမ်ရှိသူနဲ့ မရှိသူကြားမှာ ဘာလမ်းခြားသလဲ
တုတ်ကွေးဖြစ်လို့ မင်းတစ်ကိုယ်လုံး အလုံးစုံကိုက်ခဲ
မျှောမှန်းထားတာထက် ပိုရင်ပို၊ မပိုရင်လျော့
အဲဒီအပေါ်မှာ ငါတို့ခံစားချက်ပဒေသာတွေ၊ အာရုံခံစားမှုတွေ
ရွာကသာ မြို့ဖြစ် မဖြစ်မသေချာဘူး၊ အမိန့်စာတွေ
ကြာပြီ၊ လူကြီးတစ်ယောက်မှ မရှိဘူးထင်တယ်
တစ်နေ့က မြို့ထဲက သုံးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှု
ယီးလေးလေး ယီးလေးယို တေးသီချင်းလေးဆို
ဟိုဘက်အိမ်က ကလေးလေးဟာ အိမ်ထဲမှာပဲ
မျက်ရည်ကို လူသုံးကုန်ပစ္စည်းလို ရောင်းလို့မရဘူးလား
ငါဘာဖြစ်လို့ မျက်ရည်ကျနေရတာလဲ။ ။
၁၄၊ ဇူလိုင်လ ၂၀၀၇
ခွဲရာမှာ သွေးရောင်စို့လာပြီး စီးကြောင်းလေးဖြစ်သွားတယ်
ပါးမှပွတ်သပ်ဖို့၊ ကြင်နာယုယဖို့၊ ချစ်ဖို့
လိုက်မမီတော့အောင် ကူးပြောင်းသွားတာကိုပဲ အလိုက်သင့်
လက်ခံရင်း လည်မြိုမှာတစ်ဆို့သွားသလို တံတွေးမြိုချရတဲ့
သူ့သဒ္ဒါမှာ ငါတို့ရဲ့အကြည့်၊ အထိ၊ အသိနဲ့မသိတွေပွားများ
ဒါပေမယ့် သူထွန့်ထွန့်လူးနေတာကို သွေးထဲခေါ်ဆဲပျော်ဆဲ
ငါတို့ပေါ်တဖွဲဖွဲ ငါတို့ထဲတဖွဖွ ငါတို့တဟဟအော်နေလိုက်ကြတာ
၁၈၊ ဇူလိုင်လ ၂၀၀၇
စက်ချွတ်ယွင်း၍၊ သူတော်စင် စိန့်၊ ဆူဒန်
နဂိုရှိပြီးသား အကြီးစားလက်ကျန်များ။ ဒေသခံတွင်းမျှမျှတတ။
အပြိုင်အဆိုင်တပ်ဆင်ခြင်းခင်ဗျား၊ ကျွနုပ်အား ပဋိပက္ခငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်
အသုံးပြုတော်မူပါ။ နှလုံးသားနဲ့ အသည်းကို ပြာဖြစ်သွားစေတဲ့အထိ
‘သေ’နတ်ရဲ့ အမှုတော်ကို။ မုန်းတီးခြင်းကို ‘သန့်စင်ခြင်း’ဖြင့်သော်လည်းကောင်း
သောက်ရေသန့်ရရှိရေးမှာ ၀မ်းရောဂါ၊ ငှက်ဖျားရောဂါ၊ အသည်းရောင်အသားဝါ
သူ့ဘာသာသူ ဘယ်တော့မှပြန်ပျောက်ကင်းနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့ ဂေဟာစနစ်ပျက်
ယုံမှားသံသယဖြစ်ခြင်းကို မြေမြှုပ်ဗုံးများ၊ သိုးများ၊ နက်ရှိုင်းအက်ကြောင်းများ
စိတ်ပျက်အားငယ်ခြင်းလို မြစ်မဲကြီးထဲစီးဝင်သော ချောင်းလက်တက်များ
အစွန်းရောက်တို့ရဲ့ ထောက်ခံမှုရရှိတဲ့ ၀မ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းဒုံးကျည်များ
တုန့်ပြန်နိုင်ရန် ‘သူပုန်ခေါင်းဆောင်နှင့်တွင်တွေ့ဆုံ’သူတပါးက ကျွန်ုပ်အပေါ်၌
ကမ္ဘာငယ်များ ကမ္ဘာသိမ် ကမ္ဘာမွှားများ လူမျိုးများ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ သူတစ်ပါး
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုမှာ တိကျတာချင်းအတူတူ ‘မျိုးတုံးတဲ့ထိ’ မျိုးဗီဇများ
လမ်းတစ်ပွင့်၊ တံတားတစ်ခုပြန်ရရှိ၊ ရွာများမီးထဲ၊ ဒုက္ခသည်စာရင်းအင်း
အပန်းဖြေနားခိုရာနေရာမှ သဘာဝအလှ၊ ဒေသခံတို့ရဲ့ ဖော်ရွေသောအပြုံး
လူသားတွေပြုလုပ်သမျှဟာ ယဉ်ကျေးမှုပဲ စစ်သုံးစရိတ်တစ်နေ့ဖိုက်မီလျံဒေါ်လာ
သိတတ်နားလည်ရန်ရှာဖွေခြင်းထက် လက်နက်ပုန်းများရှာဖွေရေး အိမ်တက်မင်္ဂလာ
အကြောင်းမူကား ပေးကမ်းခြင်းဖြင့်သာလျှင် အရွယ်ရောက်ရွာသားတိုင်း
မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်တွေ အဆိပ်ခပ်၊ ဂျီဟဒ်တစ်မျိုး၊ အလင်းဖြင့်လည်းကောင်း
အရှင်သူတော်စင် စိန့်၊ ကျွန်ုပ်အား (‘ဒိုင်း’၊ ‘အုံး’၊‘ ရွှီး’)ကူညီတော်မူပါ(‘အား’)
စစ်တစ်လှမ်းက ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိန်းမငယ် တစ်မိနစ်အတွင်းမှာ ဇရာထောင်းသွား
အို….ဆန်းကြယ်လှပါတကား အရှင်သူမြတ်ရဲ့ တန်ခိုးတော်၊ ပြီး မီးခိုးငွေ့ဖြစ်သွား
တပည့်တော်ဟာ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ရှင်သန်ရ ငါ့မှာ ဘ၀အမျိုးမျိုးအလိုမတူကြုံရ
မျက်နှာဖုံးတွေ စွပ်မနေပါနဲ့တော့ ငြိမ်းချမ်းသော ကျွန်စနစ်ပြန်ထွန်းကားရေး
‘လူမည်းကျွန်တွေထဲက တောက်တိုမယ်ရကလေးမတစ်ယောက် ငါ့ကိုပေး’
‘လူမနေတော့တဲ့ မီးလောင်မြေတွေ ငါ့ကိုပေး’ သနားတော်မူပါ ခွန်အားကျေးဇူး
‘တစ်မြို့လုံးပြာကျဖို့ ၆ရက် ၆ ည ကြာခဲ့တယ် ။လူသေကောင်တွေရဲ့ ညှော်နံ’
ကျွန်တော့်မိန်းမဖမ်းသွားတယ်၊ ကျွန်တော့်သမီးတွေဖမ်းသွားတယ်’ ကျွန်တော်မျိုး
ကြိုးစားခြင်းကိုလည်းကောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ရရှိကြပြီး
သေဆုံးခြင်းဖြင့်သာလျှင် လူသေတွေကို မြှုပ်နှံပြီး ရွာပျက်ကိုပြင်ဆောက်
အဆိပ်ခတ်ထားတဲ့မြစ်မှာ ငါးဖမ်းဖို့ ငါးမျှားချိတ်များစေတနာဖြင့်လှူဒါန်း
‘သောက်ရေအိုးတွေလည်း အကုန်ခွဲသွားတယ်’ မိုးလည်းခေါင်သွားတယ်
လူသားမျက်လုံးတစ်လုံး ပကတိကြည်လင်စွာ မွေးဖွားခြင်းခံရ
ဤဘ၀ဤမျှသာ နောက်ဘယ်ဘ၀မျိုးမှာမှ မမွေးဖွားလိုတော့ပါ
မြင်းတွေ၊ ကုလားအုပ်တွေ၊ မြည်းတွေနဲ့ မဟုတ်ရင် ခြေလျင်
စက်သေနတ်တွေ ‘နှစ်သိမ့်အားပေးခြင်း’ နေရောင်ထဲ တ၀င်းဝင်း
ဘာလို့ အသက်ရှင်လို့ ရှင်နေမှန်းမသိဘူး ဆုတောင်းခြင်းရည်ရွယ်ချက်မှာ
အရှင် သူတော်စင် စိန့်ခများလည်း ကျည်ဇကာပေါက်တွေနဲ့။ ။
၁၈ ဇူလိုင်လ ၂၀၀၇
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လိုတစ်ဆင့် ဖော်ပြ/ယူသလဲ
ဆော့ဖ်ဝဲဒီဇိုင်းမှာ ‘မိမိအတ္တကင်းလွတ်ရပ်ဝန်း’ဆိုတာ ရှတယ်
‘မိမိအတ္တကင်းလွတ်ရပ်ဝန်း’ဆိုတာ လူမရှိတဲ့ အခန်းလွတ်ပေါ့
ခင်ဗျားမရှိလည်း ကမ္ဘာကြီးဆက်ရှိနေမယ်ဆိုတာ မမေ့နဲ့
ကမ္ဘာကြီးဟာ ခင်ဗျားဦးနှောက်/နှလုံးသားကို စောင့်ခေါ်နေမှာမဟုတ်ဘူး
ကမ္ဘာကြီးဟာ ခင်ဗျားဦးနှောက်/နှလုံးသားထက် ပိုကျယ်ဝန်းနက်ရှိုင်းတယ်
သိမှုကို ငြင်းပယ်လိုက်တာနဲ့ ချုံခိုအလစ်ဝင်တိုက်ခံရတာ ဆန်းသလား
ဥပမာ၊ ‘ပလာ့စမာ’(ဥပမာကိုယ်တိုင်ဟာ ပလာ့စမာ)
အပိုင်းကြီး ၂၇ပိုင်းနဲ့အပိုင်းငယ်၁၂ ပိုင်း မီးခိုးရောင်သံဇကာကွက်
ဆက်သွားရင် လူမနေလို့ ယိုယွင်းနေတဲ့ အဆောက်အအုံတစ်ခု
မီးမရှိတဲ့ညရထားနဲ့ မီးမလာတဲ့ရပ်ကွက်ဆီ မီးပေါင်းစုံနဲ့ပြန်ရ
တံတားဟာ မဖြောင့်ဘဲ တွန့်လိမ်ကောက်ကွေးနေတာမှ ခင်ဗျာကျောအတိုင်းပဲ
‘ဖြစ်သင့်တာကတော့’ဟာ တကယ်ဖြစ်နေတာထဲမှာ လမ်းပျောက်
အချိုးအစားပြေပြစ်မှုရဲ့ တုန်ယင်အက်ကွဲတွေ၊ တောက်လျှောက်
ထပ်ကျော့စကားလုံးတွေ၊ အာမေမဋိတ်တော့တာတွေ၊ ကန့်သတ်အဓိပ္ပာယ်နဲ့
ခေါင်းစဉ်ငယ်တစ်ခုမှာ ‘ကုထုံး’လို့ ထင်ရတဲ့ပုံနှိပ်ပျက်
နှစ်ပင်လိမ်၊သုံးပင်လိမ်၊ လေးပင်လိမ် လိမ်ယှက်(လိင်ယှက်)အနေအထား
(သိမှုအသစ်နှင့် မကိုက်ညီတော့သော အယူအဆများကို ကုသပေးမည်မဟုတ်ပါ)
ခင်ဗျားဘာကိုဆိုလိုတာလဲ၊ ကျွန်တော့်စကားနဲ့ ပြေပြပါ
စကြ၀ဠာဆိုတာ သင့်သွေးခုန်နှုန်းဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မှာကို ရှင်းပြပါ
အားလပ်ချိန်မှာ ဘာလုပ်သလဲ အလုပ်မလုပ်ချိန်မှာ အားပါတယ်
ဘယ်လိုဝေဖန်ရေးမျိုးနဲ့ လည်မျိုကနေ ညှစ်ရမလဲ
နေရဲ့ပါးစပ်မှာလည်း အမြှုပ်တွေထွက်လို့၊ သွက်ချာပါဒလိုက်လို့
သူဟာ ပျဉ်းမနားမှာ ဖတ်ရင်ဖတ်မယ်၊ သန်ဖက်ခါမှာ ဖတ်ရင်ဖတ်မယ်
ထမင်းစားပြီးပြီလား ရှုးပေါက်ပြီးပြီလား ဘယ်ထုံးနဲ့ ဘယ်နည်းလဲ
အာရုံရဲ့ညွှတ်အားမျှတမှု ပထ၀ီ တေဇော အာပေါ ၀ါယော သမ္ပဇဉ်
အလေးအတွက် နက်နက်တူးရတယ် ရေမရှိတဲ့အရပ်မှာ အထူးသဖြင့်
စကားသံရဲ့ အတွင်းလွှာမှာ မြုပ်နေတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲသစ်တွေ(ခင်ဗျား/တွေ)
အနာဂတ်ဆီ မိမိကိုယ်မိမ်ိ မဲဇာပို့ခြင်းများ
လွတ်လပ်စွာဆက်စပ်ယူရမှုအနုပညာ(နို့၊ နေပါဦး၊ ‘အနုပညာ’ဆိုတာဘာလဲ)
‘သေး၊ ဝေး၊ နီး၊ မြန်ရင်မမြင်ရဘူး‘(ဆီးဘန်းဆရာတော်လို့ထင်တာပဲ)
သင့်နာလည်မှုစက်ရုံမှာ မီးအားပြည့်လား၊ အလုပ်သမားတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေး
ဒါကိုဖတ်ရင်း ခင်ဗျားကိုယ်ခင်ဗျား ထားသိုထားတဲ့ နေရာဟာ ရပ်နေသလား
အဲဒီနေရာရဲ့ ဖွဲစည်းခြင်းယဉ်ကျေးမှုဟာ ခင်ဗျားရဲ့ကိုယ်တစ်ခြမ်းမကကို
အဲဒါကို ကျွန်တော်တို့ဆက်မကြိုးစားရင် ပိုမိုများပြာလာနေတဲ့သက်သေတွေက
ဘာပြနေလဲဆိုတော့ အဲဒါကို ကျွန်တော်တို့ ဆက်ကြိုးစားလို့
ဒါဟာလည်း မရောက်ဖူးတဲ့ စပေ့စ်တစ်ခုပဲပေါ့
ဧရာမနာလန်ထမှုကြီးပေါ့ အရှိတရားကို ကိုယ်ရှိခိုင်းထားလို့မရဘူးဆိုတာ
ခင်ဗျားကို ခင်ဗျားအရိပ်ထဲမှာ ဘယ်လိုဘယ်ပြန်မြင်သလဲ
ဒါဟာ ကဗျာတစ်ပုဒ်လို့ပဲမှတ်၊ ရပ် ကြည့်၊ သွား
အီလက်ထရွှန်များ စီးဆင်းနေတာ သတိထား
ခင်ဗျားဦးနှောက်ထဲက ဆော့ဖ်ဝဲတွေ ခေတ်တုံးသွားပြီလား
ခင်ဗျားစိတ်ဟာ ခင်ဗျားနဲ့ အမြဲအဆင်ပြေသလား။ ။
၂၊ ဇူလိုင်လ ၂၀၀၇
ပျော်ရွှင်ပြရင် ပိုက်ဆံပေးမလား ဘယ်လိုပေးမလဲ
အချိန်နဲ့လား တန်ချိန်နဲ့လား ကျင်းနဲ့လား
တစ်အိမ်သားလုံး တစ်ရပ်ကွက်လုံး တစ်မြို့လုါံ်
ဇိမ်ခံ ခံစားမှု ကြွားလို့ရစရာနောက်တစ်ခု
ပျော်မဆုံး မော်မဆုံး အားလုံးတပြုံးပြုံး
ပိုက်ဆံလိုချင် ပျော်ရွှင်ပြ ပိုက်ဆံရတယ်ခင်ဗျ
ဦးဦးနဲ့ ဒေါ်ဒေါ်တို့ ခုလို ကျိကျိတက်ချမ်းသာကြတာ
ပျော်ရွှင်မှ ပိုက်ဆံရတယ်ဆိုတာ မှတ်ထားနော်
ပျော်ရွှင်မှုနဘယံ ဓနံ လာဘံ
ငွေရှင်တွေလို သီးစေသတည်း။ ။
၃၀၊ သြဂုတ် ၂၀၀၇
ပြောဖန်များ မေးခွန်းရ/ ကြိတ်ဖတ်တွေ
အန္တာတိကရေခဲမြစ်တွေ၊ ဘယ်ဟာရစ် ဘယ်ဟာပင့်တွေ
လင်ဖိုစိုက်တ်တွေ၊ ပင်စိမ်းရွက်တွေ၊ ဂ၀ံကျောက်လိုစကားလုံးတွေ
ပကာသား ခြစားသလို နင်းလိုက်ရင်ကြေသွားမယ့်စကားလုံးတွေ
ဖောင်းကနဲ ကွဲသွားပြီ လေသေကျပျောက်တဲ့စကားလုံးတွေ
ထမင်းထဲ ခဲလို သဲလို တကျစ်ကျစ်ဝါးမိတဲ့ စကားလုံတွေ
ဖုန့်မှုန့်လို အပုတ်နံလို နှာမှုတ်ထုတ်ရတဲ့ စကားလုံးတွေ
မလုံးတော့ မ၀န်းတော့တဲ့ စကားပြားတွေ စကားပဲ့တွေ
ဂျပန်ကော်၊ ကိုရီးယားကော်နဲ့ပြန်ကပ်ထားတဲ့ စကားကျိုး
စကားကြေ စကားကွဲ စကားအက်တွေ
ကျကွဲလျှင် လျော်ရမည်’ သတိပေးစာတန်းမပါလည်း
‘စကားအကုန်မပြောနဲ့’ထဲမှာ ချန်လှပ်ထားတဲ့ စကားလုံးတွေ
ခြုံထွင်ရတဲ့၊ လမ်းရှင်းရတဲ့၊ ကျော်သွားရတဲ့ စကားလုံးတွေ
မြတ်ဖုတ်အောက် မိုင်းထောင်ထားတဲ့ စကားလုံးတွေ
ရွှီကနဲ ရွှီကနဲ လှမ်းလှမ်းပစ်တဲ့ စနိုက်ပါစကားလုံးတွေ
ရုပ်ရောစိတ်ကိုပါ မညစ် ညစ်အောင် လာလာလုံးတဲ့
စကားဆုံးတွေ စကားတုံးတွေ စကားရှုံးတွေ
အိပ်ကောင်းခြင်းအိပ်မရတဲ့ အလုံးအခဲ စကားခြင်တွေ
စကားချဉ်တွေ စကားခါး စကားပုပ်တွေ
ကိုယ့်သွေးပဲထွက်ရတဲ့ စကားသန်းတွေ စကားမွှားတွေ
အဲဒါ ငါတို့တစ်တွေ ငါတို့တစ်တွေ ငါတို့တစ်တွေ။ ။
၂၊ စက်တင်ဘာလ ၂၀၀၇
မနက်ဖန်မှာ ဒီဈေးနဲ့ မရတော့ပါ
အတွက်လျော်ကြေး မျိုးရိုးဗီဇခွဲခြားမှုနဲ့ မျိုးရိုးဗီဇအရည်အသွေး
တစ်ဝက်တွေ ဆီမီးတွေ အလျားလိုက် ဒေါင်လိုက် ပိဿချိန်လိုက်
ဟန်တင်တင်ရောဂါနဲ့ ဦးနှောက် တဖြေးဖြေးပျက်ဆီးယိုယွင်းလာမှု
အာရုံခံစားမှုကျန်းမာရေးမှာ အရိအချွဲတွေ အပေါက်အပြဲတွေ
ဒါတွေ ဒါတွေဟာ ဇာတ်မတူသား/ဇာတ်တူသား/ဇာတ်ခြား ဇာတ်ကောင်တွေ
အလောင်းတင်လှည်းရဲ့ ‘ငါမှန်တယ်၊ ငါမှန်တယ်’ ဒလိမ့်လိ့မ်သံညံ
ဓာတ်မှန်မှာမပေါ်တဲ့ ဒဏ္ဍာရီလိုလို ဒဏ်မှန်တရားလား ဓမ္မန္တရယ်လား
ဆေးပညာလောကရဲ့ သူရဲကောင်းနဲ့ အာဇာနည်တစ်ယောက်ပေါ့
‘အရင်ဦးဆုံး’ ပြိုင်ပွဲမှာလို သူ့ထက်ငါစောစီးစွာ
နှစ်ခုစလုံးဟာ ဆင်ခြင်မှုအဓိက အမြင်တွေပဲ
သိပ္ပံပညာရဲ့ ပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန် အခန်းကဏ္ဍ
ယုံကြည်မှုကို ဒီနေ့ရဲ့ ဘယ်လောက်
ထိပ်တန်းလူရွှင်တော်တိုင်းမှာ စိတ်ဓာတ်ကျမှု အိုင်းအနာ
ယနေ့ဈေးဖြစ်၍ ဈေးဆစ်ခြင်းသီးခံပါ။ ။
၃၊ စက်တင်ဘာလ ၂၀၀၇
နှလုံးသားရဲ့ အထူးခံစားရေးဒေသဟာ မှောင်မိုက်လင်းလွန်း
ကျွန်းမျောလို သူ့ကိုယ်သူနားမလည်စွာ ဒေါက်ထောက်စရာ
‘အခြေခံပုံကြမ်း၊ အကြမ်းထည်’ရဲ့ ကောက်ကြောင်းလား
အကြည်လား အနောက်လား အညစ်
ကောင်းကင်ပေါ် ကော့ကာ ကော့ကာ ထိုးတက်သွား
(ဟော ….ဒီမှာကြည့်စမ်း…ဘာသာစကား…လုပ်ပုံ၊ လုပ်ပုံ)
ထဲမှာ ခံစားမှု(အရှိတရားကို ချုပ်ကိုင်သိယူနိုင်သလောက်
သူ့နှလုံးသားဆီ)ကိုယ် မင်းကို ဂျောင်းဂျောင်းမြည်နေအောင်
ကိုယ်မင်းကို ပတတ်ရပ် ငတ်မွတ်သည်
ကိုယ့်အား ရစ်ခွေနွယ်ပတ် ပတ်ကြမ်းတိုက်ပြီ
ရေစပ်မှာ ပါးစပ်ကြီးဟဖြဲထားတဲ့ မိကျောင်းလို
၄၊ စက်တင်ဘာလ ၂၀၀၇
ပြဇာတ်အစတွင် တိုင်ကပ်နာရီသည် ၁၇ချက်တီး၏(စမန ၈)
ကဗျာဟာ မော်ဒန်မြို့ပြရဲ့(စမန ၂၁)ဂီတကို နားထောင်ခဲတယ်၊ အရက်တွေ
မြည်းခဲ့တယ်(စမန၅၀)ရဲ့ အစွန်အဖျားတွေထဲမှာ (စမန ၂၁)တလွဲတွေ
‘အဲဒီလောက်အမြင့်မှာ ကျားသစ်ဟာ ဘာကိုလာရှာလဲဆိုတာ’
(စမန ၈၈) ဇာတ်ခုံပေါ်၌ သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်မြင်နေရခြင်း
စကားလုံးများ၏ ဟိုမှာဘက်၌(စမန ၂၉)
တိတိကျကျမျော်လင့်ထားရင်တော့ ခင်ဗျားစိတ်ပျက်သွားလိမ့်မယ်(စမန ၄၅)
သေခြင်းတရားဟာ စက်ဘီးနဲ့လာတဲ့….တွေလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ(စမန ၇၉)
တကယ်တော့ လူသားဟာ..(စမန ၃၈)
ဘာများလုပ်စရာ ကျန်သေးလို့လဲ၊ နေဖို့ကလွဲပြီး
……..နေ၀င်ဆည်းဆာရဲ့ လွှစာမှုန့်တွေကို စားသောက်(စမန ၇၅)
မေ့ဆေးမပါဘဲ ကလေးကို ဗိုက်ခွဲမွေးပေးလိုက်တယ်(စမန ၈၄)
(စမန ၂၀)အပျော်လွန်ကျူးပျက်စီးမှု၊ အရူး
ထမှုတွေအဖြစ် (စမန ၇၃) အေးခဲနေတဲ့ တန်ဒြာဟင်းလင်းပြင်
ဒီကူးနင်း(de kooning) က
အိုဟာရာနဲ့ စတွေ့တော့ ‘သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး နိမိတ်ကောင်းတဲ့
ခံစားချက်မျိုး ဖြစ်တယ်ဗျာ’လို့ပြောတယ်(စမန ၆၁)
ခြုံကြည့်ရင်(စမန ၆၉)ဒိန်းဇက်(ဂ်ျ)ဟာ ကဗျာဆရာတစ်ယောက်
မျှာသာဖြစ်တယ်။….တခြားရွေးချယ်စရာ မရှိလို့ဘဲ။(စမန ၈၁)
ဟယ်ရီရဲ့ ပုပ်နေတဲ့ ခြေထောက်ကြီးက
ခြင်ထောင်အပြင်ကို ထွက်နေရဲ့။ ပတ်တီးတွေ
ကဗျာကိုရေးတာဟာ ဘယ်တုန်းကလဲ(စမန ၆၆)
(စမန ၇၈) မောင်ချောနွယ်
၂၇။ သခင်ဘသောင်း သူခိုးအာမက်- ပဉ္စမအကြိမ်(စမန နံပါတ်မပါ)ယခု
၃၀။ အောင်ခင်မြင့် ‘အဓိပ္ပာယ်မဲ့ပြဇာတ်’
(စမန နံပါတ်မပါသော်ငြားလည်း နောက်ဆုံးစာမျက်နှာ)ကျော်မွှေးစာပေ-
အဆုံး၌ တိတ်ဆိတ်မှုသည် မော်ဒန်အနုပညာ၏ရှောင်လွဲ
မရသော…(စမန ၃၄) ငါ့မျိုးဆက်ရဲ့အတော်ဆုံး
စိတ္တဇတွေ (စမန ၂၂)။ ။
၄ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၀၇
မှတ်ချက်။ ။ စိုင်းဝင်းမြင့်(ကျော်မွှေးစာပေ)ထုတ် အောင်ခင်မြင့်ရဲ့ ‘အဓိပ္ပာယ်မဲ့ ပြဇာတ်’ စာအုပ်ပါ စာသားများအား ရည်ညွှန်းလျက်။
တမင် မသပ်မရပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ထားတာ
လိုအပ်တာထက် မလိုအပ်တဲ့ အပိုအလျှံတွေ
ခုတ်ပိုင်းထားတဲ့ ငှက်တွေ ဘယ်ပျံသန်းကြသလဲ
၁၀၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၀၇
ဘာအစီရင်ခံစာပဲလာလာ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက် ဘယ်သူ့အကျိုး
ပါလာရင် သံစဉ်ကိုဘယ်လိုစီရင်သလဲ ဘယ်လိုစရင်ချက်ချမလဲ/သလဲ
ပေါင်းစုလာနေပုံ ပေါင်းစုပြီးဖြစ်သွားတဲ့ပုံ အပုံ
ပုံ ပုံတိုပတ်စ ပုံစပြကွက် ပုံစံခွက် ပုံစံထိုင်
ပုံမှားရိုက် ပုံသေကားကျ ပုံမှန်အနေအထား
ပုံပမာ ဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့/ရဲ့ စက္ကန့်တိုင်းနေစဉ်
စီမံချက် အစီအစဉ် အစီရင်ခံပါ
ပုံမှအရေးအသား ပုံမှန်အရေးအသား ပုံစံအရေးအသား
၁။ ရွေ့လျားခြင်း motion
၂။ ခုခံခြင်း resistance
၃။ ချိတ်ဆက်ခြင်း connection
၄။ စီးဆင်းခြင်း flow
၅။ အက်ကွဲလာခြင်း fissure
၁။ ပြင်သစ်တွေးခေါ်ရှင် ‘ယန်း ဘော်ဒရီလား’
၂။ အမေရိကန် LP ကဗျာဆရာ ‘ချားလ်စ် ဘန်းစတိုင်းန်’
၃။ မြန်မာခေတ်ပေါ်ကဗျာဆရာ ‘မောင်ချောနွယ်’(‘အခွန်တော်မဲ့ရသီဥတု’)
သင့်အဓိပ္ပာယ်ပြုမှုကိုလည်း အားပြုပါစေသား။ ။
၁၅၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၀၇
အဲဒါတွေ အဲဒါတွေ အဲဒါတွေပဲ ဖတ်နေလား
ပြီးတော့ နောက်ထပ်အဲဒါတွေ အဲဒါတွေ အဲဒါတွေပဲလား
အပြောင်းအလဲအနေနဲ့ဒါပဲ အပြောင်းအလဲအနေနဲ့ဒါပဲ အဲဒါ ဒါတွေပဲလား
မုန်တိုင်းရဲ့မျက်စိဟာ ဘာကိုမြင်သလဲ ကိုမိုးဇလရေ
ဟုတ်ကဲ့ အဲဒါကိုပဲ ကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းမေးနေရပါတယ်
ဒီထက်မက လုပ်နိုင်ခဲ့ရင်အကောင်းသားလို့ သူညည်းကြည့်ရှာတယ်
မိန်းမကလည်းထွက်မယ်တကဲကဲ မနည်းဆွဲထားတယ် ထမီစကနေ
စီးပွားရေး၊ လေထုရေထုညစ်ညမ်းမှု၊ အသာအရောင်ခွဲခြားမှု၊
နိုင်ငံခြားအကူအညီ၊ ပြန်လည်မွန်းမံပြုလုပ်ခြင်း၊ အကျဉ်းဦးစီး၊
အက်စစ်မိုး၊ ခေါင်းသုံးလုံးပါလာသောခွေးပေါက်စ၊ ဖက်ရှင်ပြပွဲပထမဆု …
မိသားစုရဲ့ infastrusture ကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတာ
(မရှိ၊မသိ)အထက်အရာရှိက ဘာပြောမလဲကို ရိုးရိုးကျိုးကျိုးနာခံစွာ
သဘာဝဘေးအန္တရယ်တွေ၊ မျိုးသုဉ်းမှုတွေ၊ သစ်တောပြုန်းတီးမှုတွေ
အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ ကိုယ့်ပေါ်ပြိုကျလာဖို့ အမြဲတာစူနေတဲ့
လျှာထိုးလား ပါကေးလား သမံတလင်းလား ဖယောင်းပုဆိုးလား
၀ရီး ၀ရီး ၀ရီး ၀ရီး (ဘေးတိုက်လဲကျသွားပြီး
အလားတူစွာ တစ်ပါးသူခမျာ အားယူစရာ…
လျှာမရှည်နဲ့ နားငြီးတယ် လုပ်စရာမရှိရင် ရော့အဲဒါ
မပြီးမချင်းဖတ် ဖတ်ပြီးပြန်ဖတ် ပြန်ပြန်ဖတ်ဖတ်
၁၇၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၀၇
ဆူနီလား၊ ရှီအာလား၊ ခေတ်ပေါ်လား၊ LPလား၊ ထုတ်လုပ်သူလား
ထုတ်လုပ်ခံလား၊ အဖြူလား၊ အမည်းလား၊ ဧကော အခြေခံလား
ဒွိသမားလား၊ ဒွိသမားလား၊ ဒါရသင်္ဂဟသံသယ၀ါဒီလား
ဆူညံ သွေးလေမြန်ဆန် သဘာဝဘေးဒဏ်
သင်္ခါရဒဏ် ရာဇဒဏ် ဘယ်နားထိမှန်
မီးခိုးဟာ တသလင်းချိတ်လား၊ ဆူပါကော်ဖီမစ်လား
ကျန်တဲ့ ၂၀%ကတော့ မိသားစုကိစ္စလား၊
ပြည်သူ့အချစ်တော် အေးအေးငြိမ်းနဲ့ အိအိငြိမ်းလား
စီးပွားရေးကျသွားတာများ ယုံရင်တောင် မပြောနိုင်သလိုရေနစ်လို့
ဒွေးကာနက်ဂျီလို ဘ၀မှာအောင်မြင် လူချစ်လူခင်ပေါများဋီကာလို ရုပ်ရှင်ကား
ဒါပေမယ့် ဒွေးနောက်ဆုံးကားထဲမှာ ဒါဒါလည်းပါတယ်မဟုတ်လား။ ။
၂၁၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၀၇
အစာမကြေစနစ်က ပြန်အန်ထုတ်လိုက်တဲ့ စကားလုံးတွေ
သုညဟာ သူ့ညရဲ့ အခြားအလင်းနဲ့နေ့ပေါ့
ရွေ့နေတဲ့လျှို့ဝှက်ချက် ရှုထောင့်တစ်ခုစာနဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာ
ငါဝှက်ထားတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ဘူး(ငါ့မှာ ‘ငါ’လည်း မရှိဘူး)
ငါနဲ့ငါ့ကို ၀ှက်ထားတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်(မရှိတာ လျှို့ဝှက်???)
empiri = sempire = အင်ပါယာ(ဥပမာ၊ ရောမအင်ပါယာ၊ ဧကရာဇ်)
empiri = empirical = ဒိဋ္ဌမျက်မြင်
ရေးသားခြင်းသက်သက် ရေးသားခြင်းပကတိ ရေးသားခြင်းဧကန်စစ်စစ်
ရေးသားခြင်းကလွဲလို့ ဘာကိုမှ မညွှန်သော မညွှန်းသော လုပ်ရပ်သက်သက်
ကရု ကရူး ကရု ကရူး တကူးကူးလို ခေါင်းမာတဲ့ အလင်းမျှင်လေး
ဒီနေ့ကို ရိတ်သိမ်းမလား၊ လိပ်သိမ်းမလား၊ ချိတ်ပိတ်မလား
စာမျက်နှာသေ စာသေ စာသေရဲ မျက်နှာသေ
နောက်က စုံထောက်ပမာ ထပ်ချပ်မကွာ ဦးထုပ်ရှည်ရှည်
အရိပ်နှစ်ခုလည်း အော်သံထဲမှာ အဲဒီတံတားမှာ
စာမျက်နှာပေါ်မှာ အဖြူအမည်း စာသားဟာ မီးခိုး(ရောင်/ငွေ့)
အပေါ်ယံမှာ မျက်နှာပြင်မှာ အနက်(အဓိပ္ပာယ်)တစ်ခုဟာ
ဟိုဘက်ကမ်းက မဟုတ်ဘူး ချိုင့်ဝှမ်းကမဟုတ်ဘူး
မဟုတ်ဘူး မဟုတ်ဘူးထဲက မဟုတ်ဘူး
ပါးစပ်က အပေါက်ဟာ ပြဲသွားတယ်
လောကကို လှမ်းကိုက်ချင်တဲ့ ဝေါဟာရ
ရေးသားခြင်းရဲ့ အစွန်းအစပ်မှာ အက်ကြောင်းထဲပြုတ်ကျတဲ့အရာ
ပြောပြီးသားစကားကို ပြေးပြီးသား ခြေလှမ်း/လို
လမ်းမှာ ခရီးလွန်နေတဲ့ ပြောခြင်း/ ပြေးခြင်းတစ်မျိုး
တံတားဟာ အဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့ တုန်ခါရမ်းလို့
မပြောပဲပါနေတာကို ညှိယူဖို့ ငြင်းပယ်ခြင်း(ဘာလဲ၊ ဘယ်သူလဲ)
ဘယ်မှာဆုံးမလဲ ဘယ်လိုဆက်မလဲ ဘယ်လိုဆုံးမလဲ ဘယ်မှာဆက်မလဲ
အိုးထဲကနေ လျှံကျတဲ့ရေဟာ ရေမဟုတ်သေးလားဆိုတာ
အိုးရဲ့မေးခွန်းလား၊ ရေရဲ့ မေးခွန်းလား
အဓိပ္ပာယ်ပြုလုပ်ခြင်းရဲ့ အလယ်မှာ လပ်နေခြင်းအဓိပ္ပာယ်
…………………..ရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေကို ငြင်းပယ်နေမယ့်အစား/ သော်ငြားလည်း/သည်ရှိသော်
ပြောခြင်းရဲ့ အပြောကျယ်ခြင်းအဖြစ် ပြောပုံဟာ ပုံပြောလာတယ်
အညွှန်းနဲ့ အညွှန်းခံကြားက အခြားဂယက်တစ်ခု
အခြားအနက်တစ်ခုခု မဟုတ်ရင် အခြားမီးခိုးတစ်ခုခု
အကြောအမျှင်တွေကို အလင်းထဲ ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးပြုစုဖို့
တကယ်ကော ဘာရှိကြသလဲ တိုလီမိုလီအတွေးအခေါ်များရွှိုင်းဖို့
အကွာအဝေချင်းမတူတဲ့ လမ်းတစ်လမ်းပေါ်မှာ မျက်နှာချင်းဆိုင်
၀ကွက် ပါးကွက်အာဏာသား လွတ်လပ်ရေးကွက်သစ်
ပ လပ်ထားတဲ့ အပေါက် ပလတ်စတစ်ညှော်နံ့စူး
အသံတိတ်ပြိုကျသွားတဲ့ နေ့တစ်နေ့ရဲ့ ဒိဋ္ဌဓမ္မများ ဖုန်ထသွား
တည်ကြက်တစ်ကောင်လို ကိုယ် မနက်မနက် မိုးလင်အလုပ်ဆင်း
အဓိပ္ပာယ်တွင်း အဓိပ္ပာယ်ချင်း အဓိပ္ပာယ်ရင်း အဓိပ္ပာယ်ကြွင်း
ကရု ကရူ ကရူး ကရု ကရူ ကရူး ဆူးလေး ဆူးလေး
အဲဒီကြားက အဲဒီတံတားရဲ့ အစွန်းနှစ်ဘက်ကို ဆက်လိုက်
တစ်လျှောက်နဲ့ ကန့်လန့်ဖြတ်မှ အမြဲ သူစိမ်းရဲ့ အထိအတွေ့စူး
အလံတွေရဲ့ ဘာသာစကားလေထဲမှာ တဖတ်ဖတ်လွင့်စင်
ရင်ထဲက ကွက်လပ်ကြီးထဲ ဘာသာစကားလေဆင်နှာမောင်း
ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ခရီးဟာ ကဗျာရဲ့လမ်းကြောင်း
ကြခတ်ဝါးတွေ ဆီးပင်ဆူးတွေ မန်ကျည်းကိုင်းတွေ အက်ကြောင်းတွေ
သတ်မှတ်ထားတဲ့ အကွက်ထဲမှာပဲ သတ်မှတ်ချက်လပ်နေတာ
အဲဒါကွက်လပ်ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်/ အဓိပ္ပာယ်ရဲ့ ကွက်လပ်
အညွှန်းနဲ့ အညွှန်းခံကို မရမက ဆွဲစေ့ကြည့်တဲ့
အက်ဒ၀ပ် မန့်ခ်ရဲ့ ‘အော်သံ’ည နေခင်းထဲမှာ
၀၊ ဟ၊ အော်ဒင်ရဲ့ နှစ်ကြောင်းကို ၀ကွက်အပ်လိုက်တယ်
‘ကဗျာဟာ ဘာဆိုဘာကိုမှ မဖြစ်စေရဘူး’
ပါးစပ်ဟကြည့်စမ်း ဟဦး ဟဦး ဟဦးဟ
အော်ကြည့်စမ်း အော်ကြည့်စမ်း အော်ကြည့်စမ်း
အဲသလို အသံ၊ အနက်၊ အဓိပ္ပာယ်၊ အရောင်အဆင်းနဲ့
၃၀၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၀၇
အသိဉာဏ်ဂိတ်ဆုံးမှာ ဘာသာစကားကို ရပ်ထားလို့မရဘူး
စဉ်းစားနိုင်သမျှရဲ့ နယ်နိမိတ်ဟာ ပြောနိုင်သမျှရဲ့ နယ်စွန်းနယ်ဖျား
မဆုတ်မနစ်ကြိုးပမ်းခြင်း၊ အတိုက်အခံပြုခုခံခြင်း၊ ချဲ့ထွင်ခြင်း၊
မရှိတာထက် မသိတာခက်နဲ့လှည်းဝင်ရိုးမှာ ဒိုင်နမို
အဲသလိုမျိုးသာ စဉ်းစားလာကြမယ်ဆိုရင် ဘာတွေဟာ ဘယ်လိုများ
ဖွဲ့စည်းမှုကိုပြုပြင်ရန ဦးခေါင်းလာရောက်အပ်နှံပါသည် Big Boss
ကြုံတုန်း နှလုံးသားရဲ့ ရှော့ဘားအလိုင်းမင်း ချိန်သွားပါလားနဲ့ ပါဝါ၀င်းဒိုး
ထပ်ကျိုးသွားတာ အရင်ကရိုင်းရှပ်ပဲလား ဘက်ထရီအိုးလဲပြီးပြီလား
စာဖတ်သူကို အကဲစမ်း ရသ၊ ကျင့်ဝတ်၊ ရှေ့မီး၊ နောက်မီ၊ ၀ိုက်ပါ
ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါ မဟုတ်ရင် ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါ ဘာလို့ထိန်းသိမ်းထားနေလဲ
ဇက်ကြိုးလျှော့၊ ဇက်ကြိုးသပ်၊ ဇက်ကြိုးလွှတ်၊ လေပေါင်ချိန်၊ ဆီရေလေ၀ိုင်
အပြန်အလှန်မျှော်မှန်းမှုများနဲ့ ဇာတ်ကြိုက်နတ်ရိုက်၊ ဖွဲရောင်းစကားဝယ်
ပမာသဒ္ဒါ သူရင်းငှား မဟုတ်သလို၊ ဒါပေမယ့် အခုတော့ အရှင်းကြီး၊ အရှင်ကြီး
‘ဘာသာစကားကို ၀န်းရံ၊ ကဗျာကိုသိမ်းပိုက်’
ဘယ်လိုကို ဘာထက်ဦးစားပေးသော ချောဆီ ဘရိတ်ဆီ ရေတိုင်ကီ
ဖွင့်ဆိုမှုသစ် ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ ဖွင့်ပွဲမှာ ဖဲကြိုး၊ ပူဖောင်းနဲ့ တကယ့်ကတ်ကြေး
ဘေးမှာ သေ၀ပ်စွာ လှရင်ဗန်းကိုင် လှေအဆင်းမြင်းအတက်
အပျော်ဆက်မှ ဘော်ချက်လို့ရ မာနေရင် အာ(ရ်)ကေ မ၀င်ဘူး
ကြေးမုံ။ မှန်။ ကြည့်မှန်။ တံလျှပ်၊ တံလှပ်။ စိမ့်မြေ။ ရွှံ့။
ညွှန်။ ရွှံ့နွံ့။နွံ့နစ်နေသည်။ နုနုနယ်နယ်မှာ နယ်စုံနွမ်း။
ဘယ်သူ့ဘ၀ဟာ ဘယ်သူခွက်လဲ လူမှာကွန်ချာ လူမှာကွန်ယက်
ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးရာကနေ တစ်ကိုယ်လုံးဆီချေးစွဲ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဟွန်းမတီးရနယ်မြေမှာ ကလိုင်ခေါက်မှုနဲ့‘အင်ကွာရာရီ ၀င်နေသည်’
ကြည့်စမ်း၊ ကြည့်စမ်း၊ ပြောနေလိုက်တာ စကားပလုပ်ပလောင်းနဲ့…
ဒီသိပ်သိပ်သည်းသည်းထဲမှာပဲ ဒီအသီးအပွင့်ဟာ သီးပွင့်ရတာ
မြင်လား၊ စကားလုံးတွေ၊ လိမ့် လိမ့် လိမ့် လိမ့် လိမ့်နေလိုက်ကြတာ
ရထားလာသည်။ တံတားမဖြတ်ရ။ မြို့ဝင်ကြေးပေးဆောင်ပါ။
ရှေ့ကိုက် ၁၀၀ တွင် လမ်းပြင်နေသည်။ နေထိုင်မှုပြင်နေသည်။
ဘ၀ပြင်နေသည်။ အရှိန်လျှော့မောင်းပါ။ ဘာကြောင့်ရပ်ရပ် ဘေးဆင်းရပ်။
ဘေးကင်းမှ ရန်ကင်းမည်။ ရှေ့တွင် နွားအုပ်ဖြတ်နေသည်။
အကြောင်းအရာရဲ့ နှလုံးသားဟာ ဘာပုံသဏ္ဍာနဲ့လာသလဲ။
ဂျပန်မိတ်၊ ကိုရီးယားမိတ်၊ တရုတ်မိတ်၊ ဂျာမဏီမိတ်၊
ဟိုတုန်းကဆို ဘရိတ်ရှူးကို တံစဉ်းနဲ့တိုက်ခဲ့ကြရတာ
ကျွန်မမှာ ဓာတ်မစီးမီးမလာနဲ့ ကျွန်မရဲ့ ဟိုနေရာ ၀ါယာရိန်းလေး
ဟေ့၊ ဟေ့၊ ဦးဇင်းရဲ့ ဒူးဇစ် အဖွားရဲ့ ဟိုက်ဒြောလစ်
ဆက်စပ်ဝန်းကျင်ကိုပါ တစ်ဆက်တည်းစမ်းသွားမလား၊ ဆရာ။ ဈေးချင်းအတူတူပါပဲ
‘ပုံမှန်’ဆိုတာ ‘ပုံစံဝင်’ လား ဘယ်အကန့်အသတ်ရဲ့ဘောင်
အတွေ့အကြုံကို ပေါက်ဖွားစေတာ တွေ့ကြုံမှုကို စီမံအောင် စီမံတယ်နဲ့ ရောင်းရင်းများ
ရှိပြီးသားကို မိတ်ကပ်လူးရုံသက်သက် အလှဖန်တီးရှင် စဉ်းစားနည်းဇလုပ်ကြီးနဲ့
မိုးအဖြစ်မြေ မြေအဖြစ်မိုး မှ အဖိုးအဖွားအဖြစ် သားမြေးမြစ်များ
မရှိခြင်း၊ ကွယ်နေခြင်း၊ ပယ်ထားခြင်း၊ ပလပ်ထားခြင်းများကိုလည်း သတိထားစွာဖြင့်
ယာယီသေချာမှုများရပ်နားရန် ညနေ ၆နာရီမှ နံနက် ၆ နာရီ သတ်မှတ်ဇုံ
ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကို ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့် အစစ်အဆေးရှိသည်ကို သတိပြု
ဘာသာစကားတွင် တွေ့ရှိရတတ်သောအဓိပ္ပာယ်များ ကွင်းဆက်ကွင်ဆက်ပုံ
ဘာသာစကားနဲ့ ကွဲကွာသွားကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့
ဘာသာစကားနဲ့ ပြန်ဆက်သွယ်ဖို့ ယှက်နွယ်ဖို့ ပတ်သတ်ဖို့ စပ်ယှက်ဖို့
အာဘော်။ တစ်ဦးတည်းအဆိုအတွက်တေး။ ခြောက်သွေ့သော။ ငြီးငွေ့ဖွယ်ရာဖြစ်သော
ထိုအဆို ဇာတ်ရည်စပြုလာစဉ် အနှီဝါကျသည် ကား၍သာ ခံနေတော့၏
အခိုင်အမာပြောဆိုလိုက်တဲ့ အချိန်မှာပဲ မျက်နှာဖုံးဟာပြုတ်ကျ
ဇာတ်စင်ပေါ်မှာ ဇာတ်ဝင်စကားပြောရင်း ပရိသတ်ကို အရပ်စကားလှည့်ပြောသလို
ဆီချေးညစ်ကပ်၊ လုပ်သက်ရင့်စကားလုံးယားယားတွေနဲ့ အင်ဂျင်ကိုကိုတော့တယ်
စကားလုံးတွေရဲ့ ရာဇ၀င်မှာလည်း သွေးချောင်းစီးခဲ့ပေါ့
အဓိပ္ပာယ်ကို အလျှော့ပေးလိုက်တာဟာ သိမှုရဲ့အောက်စီဂျင်ကို ဖြတ်လိုက်ခြင်း
ကဗျာရဲ့ကမ္ဘာမှာ ကမ္ဘာသားစကားအလုပ်လုပ်ပုံရဲ့ မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းမျဉ်း
ဆီဖြည့်စဉ် စက်ပိတ်ထားပါ ကဗျာလမ်းကြောင်းပြင်နေသည်
ခင်ဗျားက ဒီမှာရပ်ချင်တယ်မဟုတ်လား အဲဒါ အကျင့်ပဲ
ခင်ဗျား အကျင့်ခံလိုက်ရပြီဆိုတာဟာလည်း အာရုံခံစားမှုသစ်ပေါ့။ ။
၁၈၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၀၇
Categories: Kabyarz, L=A=N=G=U=A=G=E | Tags: 2007, ဇေယျာလင်း, ၂၀၀၇, Kabyarz, LP, Zeyar Lynn | Permalink.